Taariikhda Khulafaa-u Raashidiintii SOMALITALK.COM
SOMALITALK - KHULAFADII RASUULKA (SCW)
CUMAR BIN ALKHADDAAB (AMIIRUL MU'MINIIN)
''Dadkii idinka horreeyey waxaa kamid ahaa dad la ilhaamiyo, haddiina uu umaddeyda ku jiro qof (la ilhaamiya) waa Cumar''
Sidaa waxaa yiri Rasuulka Alle (SCW).
Abuu Xafsah Cumar bin Al Khaddaab, waa mid kamid ah saxaabadii suubaneyd ee udgoon badane xabiibkeenii Muxammed SCW. Waxuu ahaa mid kamid ah raggii Rasuulka SCW ka ag dhawaa, waa mid kamid ah tobankii Jannada loogu bishaareeyay iyagoo dunida guudkeeda saaran, iyo weliba amiirkii ugu horeeyay ee Mu'miniinta oo idil amiir u noqdaa. Waxuu ahaa khaliifkii labaad ee khulufaa'u Rashidiinka, iyo qofkii ugu horeeyay ee salaadda taraawiixda jideeyo in halmeel lagu tukado, iyo qofkii ugu horeeyay ee amray taariikhda hijriyada in la qoro.
Inaayadiisu waxay ahayd sidan: Cumar bin Al Khaddaab bin Nufeyl bin Cabdulcuza bin Rayaax bin Cabdillaahi bin Quraddi bin Razaax bin Caddiyi bin Kacab bin Lu'ay bin Qaalib bin Fihir (Qureysh) bin Maalik bin Nadar Al Qurashi Al Cadawi. Waxuu ka dhashay qoomyowga Qureeshta gaar ahaan jilibka banii Caddiyi bin Kacab oo Qureeshta u qaabilsanaa dhanka garsoorka iyo kala xukmidda dadka is qab qabsada. Aabahii waxuu ahaa mid kamid ahaa saadaaddii banii Cadiyi iyo odayaashii Qureeshta ugu caansanaa, isaguna Cumar waxuu kamid ahaaa raggii ugu muuqdat ashraafta Qureesheed, weliba kuwii ugu caansanaa ee geesinnimada lagu yaqiinay.
Hooyadii waxaa la oran jiray Xantamah bint Hishaam bin Muqiirah bin Cabdillaahi bin Camr bin Makhzuum Al Qurashiyah Al Makhzuumiyah. Waxay la dhalatay Abuu Jahal bin Hishaam, sidaa darteedna Abuu Jahal waxuu Cumar u ahaa abti. Cumar reer abtiyaashii waxay ahaayeen jilibkii Qureeshta u qaabilsanaa arrimaha dagaalka iyo hoggaamintiisa. Sidaa darteed waxuu Cumar ka dhashay laba jilib oo kamid ah kuwii ugu cad caddaa Qureeshta dhexdeeda oo ugu dhex muuqday. Waxuu Cumar ahaa waqtigii jaahiliyada mid wax waliba kusoo dhacsada xoogiisa iyo karti uu Illaah siiyey, waxuuna ahaa mid dabci adag oo aan waxbo laga duudsan karin laguna dhici kareyn. Waxuu ahaa geesi aan gambasho aqoon oo Makka iyo hareeraheeduba caan ka ahaa. Oo waxuuna ahaa mid aan Islaamka iyo waqtigii Jaahiligaba aanan laga adkaan.
Cumar bin Al Khaddaab waxuu caan ku ahaa xoog iyo geesinnimo, waxuuna u ahaa Qureeshta safiir ay u dirsan jireen arrimaha ay ku dhici waayaan. Mathalan markii ay isku dhacaan Qureeshta iyo qola kale oo ay ku haggaagi waayaan inay ergay u dirsadaan iyagoo ka cabsi qabo in ergeygaasi laga dilo, bay diri jireen Cumar bin Khaddaab oo Carab idil ay ka haybeysan jirtay. Waxuu dhashay Cumar kadib dhacdadii Caamul Fiil (Sanadkii maroodiga) muddo laga jooga 13 sanadood, oo ku beegan afartan (40) sano kahor taariikhda hijriga (kuna beegan markay taariikhda miilaadigu ahayd 584). Markii Rasuulka SCW lasoo dirayey waxuu Cumar jiray 26 ama 27 sano. Waxuuna islaamka la colleytamayey muddo lix sanadood ah, waxuuna Muslimay isagoo 32 ama 33 jir iyo dhowr bilood ah. Waxuu Cumar ku dhashay magaalada Makka oo uu ku barbaaray, waxuuna kamid ahaa raggii ugu ad adkaanta badnaa oo ka hor yimid dacwada diinta Islaamka. Waxuu Cumar bin Al Khaddaab aad ugu dhegnaa diintii aabayaashiis oo uu aaminsanaa inay iyadu tahay tan ugu tubta toosan ee degtay qalbigiisa, saaqdayna luddiisa iyo laftiisa, waxuuna Rasuulka SCW iyo asxaabtiisii qiimaha badneyd u muujiyey cadaawad aad u fog markii lasoo diray, oo waxuu caddibi jiray qaar kamid ah dadkii Mustadcafiinta ahaa ee iyagu Islaamka goor hore galay. Waxuu Cumar si daran u ciqaabi jiray gabadh la oran jiray Samiirah oo markii dambe xitaa indha beeshay siduu u ciqaabi jiray darteed si ay uga noqota diintan samawiga ah ee ay qaadatay.
Cumar bin Al Khaddaab waxuu ahaa mid kamid ah fardooleydii iyo raggii ugu akhyaarsanaa Qureesh iyo Carabta dhexdeeda waqtigii Jaahiliga, oo waxuu ahaa mid laga wada cabsado.
Islaamiddiisii & Mowqifkiisii Hore Xilli Muslimiintii ciriiri iyo dulmi lagu hayo, oo xaaladdu ay darantahay ayuu Illaahay nuur usoo saaray Muslimiintii oo waxaa Islaamay Cumar bin Khadaab. Rasuulka SCW ayaana taa Rabbigiis ka baryey. Cabdullaahi ibnu Mascuud waxaa laga soo weriyey inuu Rasuulka SCW yiri: Alloow Islaamka ku adkeey labo nin midkood, Cumar bin Khaddaab ama Abuu Jahal. Ducadaasi iyada ahina Alle waa uu aqbalay oo waxuu ku sharfay Cumar bin Khaddaab kadib markii uu muddo 6 sanadood la colleytamayey Islaamka iyo ehelkiisa, waxuuna taa ka hor Cumar taagnaa mowqifka abtigiis Abuu jahal, oo maysan jirin cid is lahayd ama ku fakereysay Cumar wuu Islaami doonaa, laakiin cidduu Alle hanuuniya cidi hor istaagi kari meyso, iyada ayunbaana noqon ta hanuunsan, oo Alle wax waliba isagu wuu awoodaa waana qaadir fal san.
Cumar bin Al Khaddaab waxuu ahaa mid qalbigiisu adag yahay, oo dabeecad kulul iyo awood badanna leh, Muslimiintuna in badan bay dhibaatooyin kala kulmi jireen. Waxuu Cumar ku fekeri jiray arrimo is khilaafsan oo mar waxaa ku weyneed diintii aabayaashiis, marna hawadiisii iyo macmaansigii nolasha dhalin yarannimada ee uu markaa dhex dabaalanayey, waxuuna ahaa nin cabbo khamriga, jecelna cayaaraha iwm ee ay markaasi bulshadii jaahiliga ku dhex jirtay, dhanka kalena waxuu la yaabayey oo fajaciso ku ahayd ad adkaanta Muslimiinta iyo siday ugu dul qaadanayaan dhib waliba oo ku yimaado oo aysan marna uga laabaten nuurka iimaanka ee qalbiyadooda degay. Tanina waxay ku reebtay qalbigii Cumar raad lama illaawaan ah.
Iyadooy sidaa tahay haddana Cumar waxuu ka fuqi waayey mowqifkii uu abtigiis Abuu Jahal mataanka kala ahaa ee ahaa sanam caabudka iyo la dagaallanka Islaamka. In badan kama soo wareegin markay qaar kamid ah Muslimiintii u alaab xir xirteen inay dhulka Alle u qaxaan oo meel ay dagaan oo Rabbigooda ku caabbudaan ka raadsadaan, kadib markii lagu jarribay baladkoodii oo ay sokeeyahoodii iyo xulufadoodii saareen, Cumarna waxuu kamid ahaa dadkii usababta ahaa qaxaasi iyo qaharkaas ku yimid Muslimiinta ee ay u hijroodeen dhul aysan aqoon dadkiisa, dabcigiisa iyo nolashiisa, dhankaa iyo dhulka Xabashida.
Umu Cabdillaahi Leyla bint Abii Xathmata iyo Seygeeda Caamir bin Rabiica waxay xufulo la ahaayeen reer banii Cadiyi bin Kacab gaar ahaanna qoyska reer Khaddaab bin Nufeyl Al Cadawi ee uu ka dhashay Cumar bin Khaddaab. Waxay kamid ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee islaamay, waxayna Cumar kala kulmi jireen ad adkaan iyo kadeed badan iyo ciqaab si uu uga hor istaago diinta Islaamka. Maalin maalmaha kamid ayuu Cumar jidka kula kulmay Umu Cabdillaahi bint Abii Xathmah iyagoo u haajirayo dhulka Xabashida waqtigii hijradii Abasiinya. Markaa buu Cumar su'aalay Umu Cabdillaahi halka ay u socdaan goor uu ninkeedii Caamir bin Rabiica uu howla gaar ahaa ugu maqnaa, waxayna ku tiri:" Dhulka Illaahay ayaanu meel ka raadsaneynaa, waad na dhibteen oo aad na jarribteen''.. Markaasuu Cumar si murugo leh u eegay oo sagootiyey oo iskaaga laabtay. Markii uu Caamir yimid ayay Leyla u sheegtay arrintii dhex martay iyada iyo Cumar, oo misna waxay usheegtay dabacsanaantiisii iyo hadalkiisii dhimrisanaa ee aysan horey uga baran ee ay maanta ka aragtay kana maqashay, iyo weliba inuu aad uga murugeysnaa bixiddooda. Markaa buu Caamir su'aalay xaaskiisii Umu Cabdillaahi Leyla bint Abii Xathmata:" Ma waxaad damacsantahay inuu Cumar Islaamo? Markaasay tiri:" Haah! Markaasuu yiri:" Islaami mahayo, kii (Cumarkii) aan arkay, jeer ay Islaamaan dameeraha Khaddaab. Halkan waxaanu ka fahameynaa in aysan jirin cid ku fakereysay inuu Cumar islaamo ad adkaantii looga bartay iyo la colleytankii uu diinta Islaamka la colleytamayey darteed.
Habeen habeennada kamid ah ayuu Cumar kudhaxay meel aan aqalkiisu ahayn (golo ay ku sheekeysan jireen oo ay lahaayeen reer abtiyaashiis banii Makhzuum), dabeetana waxuu yimid kacbaddii goor mugdi ah, durtaba waxuu arkay Nebiga SCW oo salaad u taagan, markaasuu daaha ku dhakaday oo damcay bal inuu dhageysto waxa uu Rasuulka SCW akhrinayo. Wuxuu markaasi Nebigu SCW akhrinayey suuradda Al Xaaqah Saa Cumar wuxuu is yiri:- Malaha kani waa sidii ay Qureeshtu sheegeysay oo waa gabyaa?
Faadimah bint Khaddaab iyo seygeeda Saciid ibnu Zeyd, waxay Islaameen caaraddii hore ee Islaamku, waxayna Islaannimadooda ka qarinayeen Cumar si uusan ciqaab xanuun badan u marsiinin, sidaa si lamid ahna waxaa Islaamay Nucaym bin Cabdillaahi Al Cadawi (Al Naxaam) oo kamid ahaa rag karmeedyadii Qureeshta gaar ahaan banii Cadiyi, isaguna Islaamiiisu waa uu ka qarinjiray Cumar, .
Ad adkaantii Cumar waxay gaartay heer uu maalintii dambe seefta u siibta inuu soo dilo Rasuulkii Alle SCW, dabeeta waxaa la kulmay Nucaym bin Cabdillaahi oo weydiiyey halka uu kusocdo? Waxuuna ku jawaabay:" Waxaan doonayaa inaan soo dilo Muxammed (SCW), kan kala geeyay arrinkii Qureeshta oo duray ra' yigoodii, oo wax ka sheegay diintayadii ee caayay Ilaahyadannada''. Waxuu yiri:" Haddaba sideed uga nabad heli doontaa banii Haashim iyo banii Zuhrah (Waa labada reer ee uu Nebigu SCW kadhashay), haddii aad disho Muxammed? Markaasuu Cumar yiri:" Malaha adiguna sidaan kaa arko diintaadii ayaad ka baxday? Waxuu yiri:'' Ma ku tusiyaa Cumaroow! arrin taa ka daran? Walaashaa Faadimah iyo seedigaa Saciid way ka baxeen diinta aad adigu haysatid''. Markaa buu Cumar xaggoodii aaday si bal uu marka hore iyagu meel u saaro oo wax uga qabto, waxaana markaa qoyskaasi la joogay Khabaab bin Arat oo Quraanka bari jirey, markay maqleen shanqadha Cumar ayuu Khabaab dhuuntay. Faadimana waxay qarisay warqaddii Quraanka ku qornaa, markaasuu yiri:" Waa maxay gunu'gunida aan maqlayey? Markaa bay ku yiraahdeen: Waxbo ma jiro''. Markaasuu yiri:" Haaheey! waan maqlay inaad diinta Muxammed raacdeen, dabeetana seedigii Saciid ayuu ka dul dhacay oo si daran ugu istaagay. Faadimah ayaa damacday inay ka qabato iyadoo qaylineyso, saa iyadiina waa uu kala tuuray oo dakhar buu gaarsiiyey. Markaasay iyadoo careysan oo dhiiguna madaxeedu ka da'ayo tiri:'' Waxaan qirayaa Inuusan jirin Alle la caabbudo oo aan Allaah ka ahayn Muxammedna SCW uu yahay Rasuulkii Alle. Markaa buu Cumar u diir naxay walaashii markii uu arkay dhiigga ka hoorayo madaxeeda oo ka kacay seedigii, dabeetana waxuu weydiiyey inay u dhiibto waxii ay akhrinayeen bal si uu u eego, hase ahaatee waxay walaashii ku tiri:" Adigu waxaad tahay fadaro najaas ah, mana taabato Quraankan cidaan daahir ahayn ee kacoo soo maydho, markaasuu kacay oo soo mayrtay, dabeetana warqaddii ayuu ka qaaday oo inta kala bixiyey akhriyey waxii ku qornaa. Cumar waxuu ahaa mid wax qora waxna akhriya, taas ayaa ka haqab tirtay in loo akhriyo, isagii ayaana akhristay, waxaana ku qornaa awaa'ilka suuradda Daha, waxuuna akhriyey Suuraddii illaa uu ka gaaray aayaddan: Anigu waxaan ahay Allaah, Illaah kalena majiro, oo aan anigu ka ahayn ee i caabbudo aniga oo kaliya, salaadduna u ooga xusiddeyda. Markaasuu yiri:" Oo maxaa ka wanaag badan oo ka sharaf badan hadalkan? Bal Muxammed itusiya. Dabeeto Khabaab oo dacal aqalka kamid ah isku qarinayey ayaa soo booday oo banaanka yimid, waxuuna yiri:" Abshir Cumaroow! waxaan ku rajo weynahay inuu Allaah aqbalay ducadii Rasuulkiisa SCW, waxaan maqlay isagoo oranaya:" Alloow! diinta ku adkeey Cumar bin Khaddaab ama Abuu jahal. Kadib Cumar waxuu soo aaday dhankii daarta Arqam bin Abul Arqam oo ay usoo tilmaameen inuu Rasuulka SCW jooga, si uu ula kulmo. Saxaabadii qaar kamid ah ayaa ka arkay doc yar isagoo seeftiisa sito oo usoo socda dhanka daarta, markaasay Rasuulka SCW usheegeen, waxaana daarta joogay rag ay kamid ahaayeen Xamzah oo isagu maalintaa ka hor saddex casho soo islaamay, Cali bin Abii Dhaalib, Abuu Bakar Sidiiq iyo rag kaloo kamid ah kuwii aysan usuuroobin inay u qaxaaan dhulka xabashida, Xamzah ayaa yiri markaa:" Bal ka leexdo oo albaabka ka furo, haddii uu wanaag rabo waanu siineynaaye, hadduuse shar u yimidna seeftiisaanu ku dili doonnaa''. Cumar waxuu soo hor fadhiistay Rasuulka SCW , markasuu Nebiguna SCW weydiiyey waxa xilligan keenay, markaasuu yiri :" Waxaa i keenay inaan Alle iyo Rasuulkiisa iyo waxa uu xagga Rabbigiis ka keenay rumeeyo, waxaana qirayaa inuusan Alle kale jirin illaah mooyaan, adiguna aad tahay Rasuulkii Alle, sidaa buuna u islaamay. Cumar markuu islaamay Ilaahay wuxuu Muslimiintii siiyey Cissi iyo xoog, xaaladdii Makkana way is baddeshay. Cumar isla markiiba wuxuu qaadey tallaabooyin, wuxuu yiri:" Waxaan is weydiiyey ninka dadka ugu necbaan og Islaamka markaasaan xasuustay inuu Abuu jahal yahay, saan gurigiisii ugu tegey oo aan irrida ku garaacay, markasuu iga furay oo i soo dhoweeyey iguna yiri " Maxaa dan oo aad u timid? waxaan ku iri:" Waxaan kuugu imid inaan ku ogeysiiyo inaan islaamay oo aan rumeeyey Alle iyo Rasuulkiisa SCW, waxii aan haysan jirneyna oo sanam caabbud ahaana aan beeniyey" Abaa jahal intuu aad u argagaxay buu yiri "waxaad la timid baa baas lahaaday". Oo gurigii ayuu dalaq yiri oo ku cararay. Dhanka kale waxuu yiri " Waxaan is weydiiyey yaa ugu warqaad badan reer Makka oo dadka oo dhan hadalka gaarsiin kara? Saa waxaan xasuustay inuu yahay Suneym ibnu Camar al- Jumuxi, markaas baan u tegay oo ku iri:" Waan islaamay''. Suu qeyliyey isagoo oranaya:" Cumar bin Khadaab waa iishay". Cumar-na wuu ka daba hadlayey isagoo leh:- Ma iilan ee waan Islaamay. Waxaa kale oo Cumar uu sameeyey markuu Islaamay ayuu Rasuulka SCW ku yiri:" Rasuulkii allow! sow inagu xaq kuma taagnin? Haddaba aynu baxna oo dhammaanteen aan kacbada ku soo tukanno". Rasuulkuna SCW inkastoo uu u ogaa in Muslimiintu ay yaryahiin hadana kama uusan diidin Cumar in ay Kacbadda kusoo tukadaan, waayo waxuu ogaa Rasuulku SCW in Islaamku iyo Muslimiintuba ay gunnimo ka baxeen mar haddii uu Islaamay Cumar ibnu Khadaab, oo sidaa darteed wuu ka yeelay hintisihiisii. Markaa baa waxaa soo baxay asxaabtii oo laba saf ah, oo safi Cumar ku jiro safka kalena uu Xamsa kujiro. Qureysh talo ayaa ku caddaatay waxayna ka caroodeen waxyaalaha uu Cumar sameeyey, waxay markaa ku tashadeen ineyba dilaan hase yeeshee waxaa arrintaa is hor taagay Al Caas bin Waa'il As Sahmi oo magan geliyey, waxayna ahaayeen xulufo isaga iyo reer Khaddaab. Markii ay Qureeshti damacday inay dilaan Cumar buu isaguna intuu Cutbah bin Rabiica qabtay hoosta gishtay oo jukeeyay, waxuu yiri :" Dayn maayo jeer aad ideysaan''.
Markii uu Cumar Islaamay dadkii sartaa kujiray oo idil baa farxad darteed mar qura la wada takbiirsaday takbiir laga maqlay Kacbada (Allaahu Akbar), Rasuulku SCW aad ayuu ugu farxay Islaamiddii Cumar. Cabdullaahi Ibnu Mascuud waxuu yiri:" Kacbadda agteeda horey ugumaan tukan illaa uu Cumar Islaamay''. Suheib bin Sinaan waxuu yiri:" Markuu Cumar Islaamay diintii Islaamku way adkaatay oo si cad baa loo faafiyey, oo kacbadda agteedaanu fadhiisannay, oo ku dawaafnay, ciddii wax na yeeshana aan iska dhicinnay oo aan ka aargudannay.
Maalintaa iyada ahi ee uu Cumar Islaamay, Muslimiintiina uu u sababay inay galaan Kacbadda oo ku tukadaan, ayaa loo baxshay Al Faaruuq ( Kii xaqa iyo baadilka kala geeyay ). Sowda bint Samcah waxay jirtay dhulka Xabashida oo ay u hijrootay, markay maqashay Islaamidda Cumar ayay timid magaallada Makka.
Cumar markii uu Muslimay waxuu Islaamkii Alle u siyaadiyey cizi iyo quwad oo, ducfigii iyo gunnimadii ayuu ka saaray, markaa ayayna Qureeshtu garowsadeen inay diintani sare mari doonta oo ay awood buuxda yeelan doonta.. Cumar waxuu ku sugnaa magaalada Makka tan waqtigii Hijriyada, waxuuna ahaa nin laga wada cabsado, oo Islaamkuna tiir adag u ahaa, cid ku dhici jirtay ama haweeysan jirtay oo wax ka sheegi kartayna ma aysan jirin, intaa dabadeedna waxuu u hijrooday magaaladii Madiina, isagoo safarkiisii hijrada kula rafiiqay Cayaash bin Abii Rabiica iyo Hishaam bin Al Caas. Hishaam isagu waalaga war helay oo waala xabbisay. Cumar iyo Cayaashna waa ay is raaceen, hase ahaatee Cayaash isaguna waala soo celiyey kadib markay qayaameen Abuu Jahal iyo Al Xaarith bin Hishaam oo hadal been ah usheegay inay hooyadii nidar ku gashay ineysan timaha shanlaysan oo aysan qorraxda ka harsan jeer ay aragto. Al Muhiim: Taasi waa qiso dheer uu u baahan in laga akhristo kutubta siirada Nebiga SCW, Cumarna isagu waa uu hijrooday, Cayaashna waa la celiyey . Markiina uu tegay Cumar magaaladii Madiina waxuu Rasuulka SCW la walaaleeyay Citbaan bin Maalik.
Qaar Kamid Ah Fadliga Cumar
Cumar bin Khaddaab waxuu lahaa fadli aad u tiro badan, oo aan runtii lasoo koobi karin, waxuuna ahaa saxaabiga labaad ee ku xigay Abuu Bakar Sidiiq Allaha ka raalli noqdee, Cumar bin Khadaab, waxaan ku xasuusannaa inuu ahaa mid kamid ah 10-kii jannada loogu bishaareeyay iyagoo dunidan guudkeeda saaran, Alla maxaa ka nasiib badan qof isagoo dunida saaran loogu bishaareeyay oo lagu yiri Janno ayaad galeysaa? May wallaahi ma jirto fadli ka weyn iyo bishaaro ka qiimo badan. Waxuu Cumar ahaa mid kamid ah saxaabadii waa weyneed iyo culimadii caabidiinta ahayd ee ka saahidday dunida iyo dhaldhalaalkeeda kuna beddashay raalli ahaanshaha Allaah Sarreeye. Waxuu ku lahaa mawaaqif dhowr ah kitaabka Allaah SW, iyo ra'yi kasoo fulay Cumar oo Alle ku caddeeyay Quraanka, waana halka uu imaam Cali ka leeyahay:" Waxaanu u arkay Quraanka inay kujiraan kalmado kamid ah kalmada Cumar (kasoo fulay) ama ra'yi kamid ah ra'yigii Cumar''.Waana sida uu Cabdullaahi ibnu Cumar ka yiri:" Ma kusoo degin dadka arrin ay si uyiraahdeen, oo Cumarna si kale u yiri, illaa Alle waxuu soo dajiyey Quraan uu ku waafaqaya maqaallada Cumar ibnu Khaddaab. Taasina waxaa marag ma doonta u ah, dhacdadii Bader markay dhacday waata keentay in maxaabiis badan oo Qureeshta kamid ah lasoo qafaashay, oo dabadeedna raggii saxaabada ay shir u fadhiisteen, shirkaasoo uu guddoominayey Rasuulka SCW, nin walibana sidii laga yeeli lahaa maxaabiistaas ayuu sheegay oo siduu ra'yi ahaan u arkayay ayuu ka dhawaajiyey. Maalintaa iyada ahi Abuu Bakar waxuu soo jeediyey in madax furasho laga qaato oo la iska sii daayo, Cumarna waxuu ra'yi ahaan soo jeediyey in qof waliba xigtadiisa loo dhiibo oo uu kurka ka jaro, waxuuna dalbaday mid isaga tolkiisa ahaa oo ku jiray maxaabiista in gacanta loosoo geliyo oo uu unuunka u dheereeyo, Calina loo dhiibo walaalkiis Caqiil, Xamzana loo dhiibo walaalkiis Al Cabbaas, waxuuna soo jeediyey in ninba ninka xigo uu kurka kajaro si aysan meeshu dakano u soo galin, oo Allena u ogaado buu yiri: inaysan wax gacaltooya innaga iyo kuwaasi na dhex oolin. Haddaba Rasuulku SCW waxuu doorbiday ra'yigii Abuu oo isagii ayuu dadkii ku xukmiyey. Isla habeenkaasina waxuu Alle toddobada samo dushooda kasoo dejiyey aayado u muuqday canaan iyo inay yahiin kuwa sabab u noqon lahaa inay ciqaab iyo carro Alle soo degto, haddaysan jiri lahayd qowl horey Rabbi uga dhacay oo ahaa : Intaa kadib u falo axsaan ama ka qaato madax furasho. (Suuratu Muxammed aayadda 4aad). Aayadii kusoo dagay shirkaas isaga ah ee Cumar ra'yigiisa ayidayey waxay ahaayeen kuwan:
" Ma habbooneyn in ay Nebi u ahaato maxaabiis illaa uu kaga jilciyo dhulka, waxaad (idinku) doonaneysaan bilicda (dhaldhallaalka) adduunka oo Allane waxuu dooni aakhiro, Allana waa adkaade fal suubban. Haddii uusan jiri lahayn qoraal horeeyay oo xag Alle ka ahaaday, waxaa idin qaban lahaa waxaad qaadateen (oo madax furasho ah) darteed cadaab daran''. Suuratul-Anfaal aayadda 46aad illaa 47aad. Qoraalka aayaddani lagu xusay ee aan horey u xusnay isagu waxuu caddeynayaa inay banaantahay madax furashada oo aad sii dayn karto maxbuuska intaad madax furasho ka qaadato, laakiin sida kamuuqato aayadda waa in ay habbooneyd in la edbiyo gaalada oo aan laga qaadan wax madax furasho ah , waxayna ayideysaa qowlkii iyo ra'yigii Cumar.
Ad- adkaantii uu diinta Islaamka Cumar ku ad adkaa heer waxay gaadhay inuu maalintii Bader markuu arkay Suhayl bin Camr oo ku jiro maxaabiista oo afhayeenna u ahaa Qureeshata ayuu yiri:" Rasuulkii Alloow! dhoolasha ka siib hasoo dhaco carrabkuye si uusan mar dambe khudbo kaasoo hor jeeddo meel uga soo jeedinin. Rasuulku SCW waxuu u tilmaamay inuu iska daayo, waxuuna u sheegay in laga yaabo in Suheyl uu maalin uun ka istaago meel la mahadsho Islaamka, oo taasina way dhacday markii uu Rasuulka SCW geeriyooday oo ay reer Makka damceen inay riddoobaan ayuu Suheyl u khudbeeyay oo ku yiri:" Ma adinkoo dadka ugu Islaannimo dambeeyay baad iminka uga hor baxaysaan? Islaamkii ayayna ku sugnaadeen.
Abuu Hureerah waxuu yiri:" Rasuulka SCW waxuu yiri:" Ummadihii idinka horeeyay waxaa ku jiri jiray qof la ilhaamiyo, oo wax loo sheego (aanan Nebina ahayn) haddii uu ummadeydan ku jirana waa Cumar.
Abuu Dar Al Qafaari waxaa laga soo weriyey inuu yiri:" Waxaan maqlay Rasuulka Alle SCW oo leh: Alle waxuu xaqu yeelay carrabka Cumar. Abuu Hureerana waxuu yiri:" Rasuulkii Alle SCW waxuu yiri:" Alle waxuu xaqu yeelay carrabka iyo qalbiga Cumar''.
Cabdullahi ibnu Mascuud waxuu yiri:" Cizzi kamaanan suulin taniyo markuu Islaamay Cumar.
Ibnu Isxaaq waxuu Ibrahiim bin Muhaajir kasoo weriyey isaguna uu Mujaahid kasoo weriyey inuu yiri:" Haddii uu Cumar ra'yi keeno, Quraan baa soo degi jirey''. Ibnu Mascuud waxuu yiri:" Islaannimadii Cumar waxay ahayd guul iyo nasri, imaaradiisina yacni xukunkiisii waxuu ahaa dhul furasho''.
Mucaad bin Jabal waxuu yiri:" Cumar waxuu geli jannada, oo Rasuulka Alle SCW waxuu yiri:" Goor aan Jannadu dhex joogo ayaan arkay daar ku dhex taallo, markaasan ku iri:" Oo yaa leh daartaan? Saa la igu yiri:" Cumar''. Sidaa si lamid ahina waxaa soo weriyey Anas oo yiri:" Nebigu SCW waxuu yiri:" Jannada ayaan dhex galay, markaasaa waxaan is arkay anigoo ku sugan qasri dahab ka sameysan, saa waxaan iri:" Oo yaa iska leh? Markaasaa la igu yiri:" Waxaa leh Shaab (yacni nin dhalinyaro ah) oo Qureesheed ah', markaasaan aniga isku maleeyay, markaasan ku iri:" Oo waayo? Markaasay igu yiraahdeen:" Waa Cumar''.
Abaa Hureerana waxaa laga soo weriyey oo uu isaguna kasoo weriyey in Nebigu SCW yiri:" Jannada ayaan dhex galay, markaasaan kula kulmay qasri dahab ah, oo i cajab geliyey quruxdiisa, markaasaan su'aalay:" Oo yaa iska leh? Markaasaa laygu yiri:" Cumar''. Iima aysan diidin inaan galo, ogaanshaha aan ogaa maseyrkaada mooyaan Abaa Xafsoow!. Markaasuu Cumar ooyey oo yiri:" Ma adigaan kaa maseyri Rasuulkii Alloow? Sidaa si lamid ahina waxaa soo weriyey Jaabir. Werin kalena waxaa ku sugneed in daarta ama qasrigu ay ag joogeen labo dumar ah, oo markay Rasuulka SCW u sheegeen in uu Cumar gurigaasi leeyahay uu ka tegay ogaansho uu ogaa maseyrka Cumar darteed, markaasuu Cumar ooyey oo yiri:" Ma adigaan kaa maseyri Rasuulkii Alloow?
Cabdullaahi ibnu Bureydah waxuu aabahiis ka soo weriyey inuu Rasuulku SCW yiri:" Waxaan xisaaban inuu sheydaanku ka leexdo Cumar''.
Muxammed ibnu Sacad waxuu aabahiis kasoo weriyey inuu Rasuulka Alle SCW yiri:" Illaah baan ku dhaartaye waddo maad martid, illaa sheydaanku waxuu maraa waddo kale (Wuxuu la hadlayey Cumar)''.
Cumar ayaa Rasuulka SCW idin weydiistay inuu usoo galo, goor ay dumar Qureesheed agjoogeen oo ay codkooduna sare ugu qaadayeen Rasuulka SCW. Markii ay maqleen idin dalbashada Cumar ayay wada aamuseen oo ay is wada qariyeen. Markii uu Cumar soo galay ayuu arkay Rasuulka SCW oo qoslahayo, markaasuu Cumar yiri:" Dhooshaadu Allaaha ka qosliyo Rasuulkii Alloow!. Markaasuu Nebigu SCW yiri:" Waxaan la yaabay dumarka kan ee markay codkaadu maqleen xijaabka kuwada orday''. Waxuu yiri Cumar:" Adigaa mudan Rasuulkii Alloow! inay iga kaa haybeystaan. Markaasuu dhankoodii u jeestay oo uu ku yiri:" Kuwii nafahooda cadawga u ahaayoow, ma anigaad iga haybaysaneysaan oo Rasuulkii Allana ma haybeysaneysaan? Markaasay yiraahdeen:" Haah! maxaa yeelay adigu waad ka ad adagtahay oo aad ka qallafsantahay Rasuulka Alle SCW''. Markaasuu Nebigu SCW yiri :" Ina Khaddaaboow! Sheydaan kugulama kulmo jid illaa waxuu qaaddaa dhabo kale oo aan taada ahayn''.
Rasuulka SCW waxuu yiri:" Waxaan leeyahay labo waziir oo samada ah iyo labo waziir oo dhulka ah. Labada samada ahi waa Jabriil iyo Miikaa'iil, labada dhulka ahina waa Abuu Bakar iyo Cumar''. Waxaanu horey usoo xusnay qisadii Abuu Bakar markaynu ka hadleynay xadiiskii beerta ee uu Abuu Muusal Ashcariyu soo werinayey, kaasoo uu Rasuulka SCW janno ugu bishaareynayey raggii u yimid oo uu ku jiray Cumar, markuu lahaa ka fur uguna bishaaree Janno''.
Cumar Ibnu Khaddaab waxuu ahaa shaqsi aan fadligiisa lasoo koobi karin , waxii uu Rasuulka SCW ka yiri iyo waxii ay saxaabada iyo a'immada saalixiintu ka yiraahdeen, waana runtii mid aad u badan oo aynu soo koobi kareyn. Waxaana xusid mudan in waqtigiisii la furtay dhul aad ubadan, uuna noqday khaliifkii ugu fatuuxaadka badnaa Khulafaa'u Raashidiinka, sadarrada dambe ayaanna ku falaqeyn doonnaa hadduu Alle Sarreeyo idmo intaa ayaana uga baxayna fadligii Cumar.
Dumarkiisii & Carruurtiisii
Cumar waxuu dhalay Cabdullaahi, Xafsah iyo Cabdiraxmaan, waxaana u dhashay Zeynabah bint Madcuun bin Xabiib bin Wahab bin Xudaaf bin Jumux Al Qurashiyah Al Jumuxiyah. Waxaa carruurtiisaasi abtiyaal u ahaa saxaabada kala ah Cuthman bin Madcuun, Qudaamah bin Madcuun iyo Cabdillaahi ibnu Madcuun.
Waxuu kaloo dhalay Zeyd Al Akbar iyo Ruqayah, waxaana u dhashay Umu Kalthuum bint Cali ibnu Abii Dhaalib, waxaana Zeyd iyo Ruqayah ayeeyo u ahayd Fadimah az-Zahraa bint Xabiibullaah Muxammed SCW.
Waxuu kaloo dhalay Zeyd Al Asqar iyo Cubeydullaah (Cubeydullaah waxaa lagu diley dagaalkii Safiin asagoo la safan dhanka Mucaawiyah) Waxaa labadi udhashay Umu Kalthuum bint Jarwal bin Maalik bin Al Musayd bin Rabiicah bin Al Asram bin Dhubeys bin Xaraam bin Xabshiyah bin Salool bin Kacab bin Camr oo ka dhalatay Khuzaaciyiinta. Markii uu Islaamka yimid ayuu furay Cumar Umu Kalthuum bint Jarwal oo Islaamka ayaa kala geeyay.
Misna waxaa kaloo uu dhalay, Caasim oo ay udhashay Jamiilah bint Thaabit bin Abii Aqlac (Magaca Aqlac-na ama waxaa kaloo lagu sheegaa Aflax- ee waa Qays) bin Cismata bin Maalik bin Ammah ibnu Dhubeycah bin Zeyd, oo kasoo jeeddo Ansaarta reer Madiina gaar ahaan Aws. Waxaa kaloo uu dhalay Cabduraxmaan Al Awsadh oo ku caan ahaa Abul Mujbar, waxaana u dhashay Luheycah oo Umu Walad ah.
Waxaa kaloo uu dhalay Cabduraxmaan Al Asqar, waxaana udhashay haweeney Umu Walad ah.
Waxuu kaloo dhalay Faadimah oo ay udhashay, Umu Xakiim bint Al Xaarith bin Hishaam bin Muqiirah, waxaa Umu Xakiim dhalay Cumar abtigiis.
Waxuu kaloo dhalay Zeynaba oo carruurtiisa ugu yar, waxaana udhashay Fukeyha oo Umu walad ahayd.
Waxuu kaloo dhalay Cayaad oo ay udhashay, Caatikah bint Zeyd bin Camr ibnu Nufeyl Al Cadawiyah. Waxay Caatikah la dhalatay Saciid ibnu Camr bin Nufeyl oo kamid ahaa tobankii Jannada loogu bishaareeyay.
Qaabkuu dumarka u guursaday waxay ahayd sidan: Cumar wuxuu guursaday Islaamka ka hor Qureybah bint Abii Umayah oo dhanka aabaha walaal kala ahayd hooyadii Mu'miniinta ee Umu Salamah bint Abii Umayah. Wuxuu Cumar uga soo tegay magaalada Makka markii uu haajirayey, waxayna sababtu ahayd iyadoo ku baaqi noqotay diintii tolkeeda ee sanam caabbudka ahayd, markiina uu Alle soo dajiyey aayadahii uu ku xarrimayey calaaqaadka Muslimiinta iyo kufaarta, kadib heshiiskii Xudeybiyah ayuu Cumar furay, waxaana markaa guursaday Mucaawiyah ibnu Abii Sufyaan oo isagu markaa lamid ahaa iyada oo mushrik ahaa. Kadib waxay Islaamtay furashadii Makka waxaana guursaday Cabdiraxmaan bin Abii Bakar kadib markuu furay Mucaawiyah, waxayna udhashay Cabdullaahi, Umu Xakiim iyo Xafsah. Cumar-na waxbo uma aysan dhalin.
Waxuu misna guursaday Umu Kaltuum, Culimadu qaarkoodna waxay sheegaan in magaceeda saxda ahi uu ahaa Muleykah bint Jarwal Al Khuzaaciyah, waxuu guursaday waqtigii Jaahiliyada, waxuuna furay Xudeybiyah kadib iyadoo gaalo ah, waxaana guursaday markii uu furay Abii Jaham bin Xudeyfah oo qowmkeeda ka mid ah, oo markaa iyadoo kale ahaa mushrik.
Waxuu misna guursaday Zeynabah bint Madcuun Al Jumuxiyah, waxay ahayd afadii saddexaad ee Cumar, waxuu ku guursaday magaallada Makka waqtigii Jaahiliga. Markii lasoo diray Rasuulkuna SCW waa ay rumeysay oo ay la Islaamtay zowjkeeda Cumar, waxayna u hijrootay magaalladii Madiina ayada iyo carruurteeda, waxay Zeynaba bint Madcuun ahayd sodahdii Rasuulka SCW illeen waxuu Nebigu SCW qabay gabadheeda Xafsa.
Kadib waxuu guursaday sanadkii 7aad ee hijriyada Jamiilah bint Thaabit oo u dhashay Caasim, kadibna wuu furay waxaana guursaday Zeyd bin Xaarith oo ay udhashay Cabduraxmaan bin Zeyd.
Kadib waxuu guursaday Caatikah bint Zeyd, waxay ahayd mid qurux iyo akhlaaq ku sifoowday, waxuu guursaday sanadkii 12aad ee hijriyada.
Kadib waxuu guursaday dumarkii aynu soo xusnay. Waxuuna dhalay dhowr carruur ah oo iskugu jiray wiilal iyo gabdho, wiilashiisu waxay kala ahaayeen: C/llaahi, Cabdiraxmaan Al Akbar, Cabdiraxmaan Al Awsadh, Cabdiraxmaan Al Asqar, Zeyd Al Akbar, Zeyd Al Asqar, Cubeydullaah, Caasim iyo Cayaad. Gabdhahiisuna waxay kala ahaayeen Xafsah, Faadimah Ruqayah iyo Zeynaba.
Cumar bin Al Khaddaab markii la yimid Madiina, waxuu laasimay la joogidda iyo ka ag dhawaanshaha Rasuulka SCW. Waxuu kala qeyb qaatay duullaamadii uu qaaday oo idil, Bader, Uxud, Khandaq, iwm. Waxuu sidoo kale hoggaamiyey qaar kamid ah wardoonno ama sirriyaad. Maalinti Bader waxuu dilay abtigiis Al Caas bin Hishaam. Maalintii Uxud waxuu kamid ahaa raggii ugu horeeyay ee durbo soo laabtay kadib markay Muslimiintii jabeen, waxuuna kamid ahaa raggii difaacayey Rasuulka SCW. Waxaynu xasuusannaa inuu ahaa Cumar ninkii ujawaabayey maalintaa (Uxud) Abuu Sufyaan, markii uu lahaa:" Muxammed ma idinku jiraa?, (Looma jawaabin), Ina Abii Quxaafah (yacnii Abuu Bakar) ma idinku jiraa? Cumar ibnu Khaddaab ma idinku jiraa? Markii loo jawaabi waayey ayuu yiri:" Waala idinka kaafiyey kuwas. Xaqiiqdii Abuu Sufyaan waxuu ogaa inay saddexduba (Rasuulka SCW , Abuu Bakar iyo Cumar) ay ahaayeen horwadeennadii Islaamka, waxuuna yaqiinsanaa inay taasi hadday dhacdo oo saddexdooduba la dili lahaa ay jab weyn ku noqon lahayd Islaamka iyo Muslimiintuba. Haddaba markaas ayuu Rasuulka SCW amray inuu Cumar ujawaab celiyo, markaasuu ujawaab celiyey oo usheegay inay saddexdooduba nool yahiin.
Cumar ibnul Khaddaab mar waliba waxuu taagnaa dhinaca Rasuulka SCW, oo dhammaan dhaqdhaqaayadii oo idil waa uu ka qayb qaatay. Markii uu Rasuulka SCW geeriyooday Cumar waa uu ku qanciyey waayey taas, miirkiisii ayaana tegay, oo waxuu yiri:" Ruuxii yiraahdo Rasuulka SCW wuu dhintay unuunka ayaan udheereyn''. Waxuu ku andacoonayey Cumar inuusan Rasuulka SCW dhiban, bal ee uu iman doono oo gacmo badan oo munaafiqiintana uu goyn doona.
Cumar waxuu raad weyn ku lahaa doorashadii Abuu Bakar, waxuuna aaminsanaa inaysan jirin cid ka hor mari karto Abuu Bakar Sidiiq. Markii uu Abuu Bakar Ansaarta la hadlayey si khilaafada ay u qabato cid Qureeshta ka dhalatay, waata uu yiri:" Labadan nin midkii aad ka raalli tahiin doorto (yacnii Cumar iyo Abaa Cubeyda bin Al jarraax). Cumar waxuu oran jiray:" In dembi la'aan kurka la iga jaro ayaan ka jeclaa inaan madax u noqda dad uu Abuu Bakar kujiro''. Sidaa darteed marka ma uusan jeclaan in uu qabto khilaafada ka hor Abii Bakar Siddiiq. Waxuu Cumar ahaa qofkii ugu horeeyay ee gacanta Abuu Bakar qaada oo la baayactamo, markaasay dadkii meesha joogayna la mubaayacoodeen. Cumar Ibnul Khaddaab waxuu la shaqeynayey khaliifadii Rasuulka SCW ee Abuu Bakar Sidiiq, isagoo markaana garab buuxo u ahaa oo howlaha la kala waday. Ka ag dhawaanshahii Cumar uu ka ag dhawaa Abuu Bakar iyo sidii uu welibo howlaha ula waday, waxay gaartay heer Dhalxa bin Cubeydillaah uu u tegay Abuu Bakar oo uu ku yiri:" Abuu Bakaroow! ma adigaa madax noo ah ama Cumar? Runtii Cumar waxuu ahaa nin karmeed aad iyo aad loo qadariyo, oo misna go'aan adag leh, waxuuna ahaa mid aan ka ag faaruqi jirin muddadii adkeyd ee xaaladdu qaraarka ahayd.
Dooorashadii Cumar & Dhul Furashooyinkiisii
Markii uu geeriyooday Abuu Bakar, khilaafadii waxuu uga tegay Cumar (oo lala mubaayacooday maalintii labaad ee geerida Abuu Bakar, 22 Jamaadul Aakhir 13 Hijriyada oo ku beegneyd Augosta 632 miilaadiga), kadib markuu Abuu Bakar kala tashaday saxaabadii Rasuulka SCW oo dhammaantoodi ay isku raaceen in uu Cumar uga tego khilaafa Dhalxa mooyaan oo isagu ka sheeganayey ad adkaantii Cumar. Haddaba markii uu Cumar khilaafada qabtay oo lala mubaayacooday waxuu halkii kasii waday howshii uu Abuu Bakar ka tegay. Aynu ka billawna sanadkuu xilka khilaafada qabtay.
Sanadkan runtii wuxuu ahaa sanadkii ugu horeeyay ee uu Cumar khilaafada qabtay, waxaana usoo qaadan doonnaa khilaafadiisii sanad sanad, innagoo tixraaceyna nidaamka iyo dhacdooyinkii dhacay waqtigiisa oo isugu jiro dhul furashooyin iyo dhacdooyin kale oo lama huraan ah in iyaguna la sheego. Dhulalka Ciraaq iyo Shaam waxaa ka socday dagaallo waqtigii Cumar, waxaana soo qaadan doonnaa sanad waliba dagaalladii ka socoday labada dhinac innagoo marba qaadaa dhigi doonna dhinac kamid ah labada dhinac, intuu Rabbi inoo sahlo.
Imminkuna waxaan soo qaadan doonnaa Howshii ugu Horreysay ee Cumar
Tani waxay ahayd howshii ugu horreysay ee uu Cumar ku dhaqaaqo, markii uu khilaafada qabtay kadib.
Waxaanu horey u ogeyn ama aan soo xusnay in Muthana bin Xaaritha uu yimid Madiina isagoo gurmad ka dalbanayey Abuu Bakar, Siddiiq markaasina waxay ahayd goor uu Abuu Bakar hayey xanuunkii uu dunida kaga faaruqay. Markii uu Abuu Bakar arkay Muthana oo dul taagan ayuu Cumar ku yiri:" Markaan dhinto yaadan galabeysan jeer aad dagaalka Ciraaq ku boorido dadka, oo Muthanna aad ciidan ku darto, haddii uu Alle idiin furo Shaamna, ciidankii Khaalid ku celi Ciraaq''. Markii uu Abuu Bakar geeriyooday, ayuu Cumar warqad u diray dhanka Shaam iyo ciidamadii ka dagaallamayey Yarmuuk, warqaddaasina waxay ahayd tii caddeyneysay casiliddii Khaalid, iyo geeridii ku timid Khaliifadii Rasuulka Alle SCW ee Abuu Bakar Siddiiq, waxaana warqaddaasi siday Manjimah bin Zaniim, goor lagu jiray dagaalkii Yarmuuk ayayna gaadhay, markaasuu Khaalid Muslimiintii ka qariyey geerida ku timid, Khaliifadii Rasuulka SCW ee Abuu Bakar si aysan u niyad jabin ciidanku. Kadib maalintii labaad ee laga soo wareegay geeridii Abuu Bakar buu Cumar ka dhex istaagay masjidkii oo dadkii u khudbeyay kuna booriyey dagaallada Ciraaq kasocda, hase ahaatee cidi umaysan kicin, ogaansho ay dadku ogaayeen darteed in la dagaallanka reer Furus uu yahay mid lagu hoogga oo ka daran kana kulul kan lShaam ka socoda. Misna maalintii labaad oo ah maalintii 3aad ee laga soo wareega geeridii Abuu Bakar ayuu Cumar kacay oo dadkii u khubeyay oo ku booriyey jihaadka iyo dagaallada ka socona dhulka Ciraaq, waxuuna ugu bishaareyey waxa sawaab iyo ajar uu Illaahay meeshaas oo kale dhex yeelay, hase ahaatee cidi umaysan kicin sidii maalintii hore, misna maalintii saddexaad ayuu sidii si lamid ah falay. Kadib waxaa kacay Muthana bin Xaarith Ash Sheybaani oo dadka xasuusiyey wixii guulo iyo nasri ee uu illaahay ku siiyey gacanta Khaalid markuu halkaasi (Ciraaq) joogay, hase ahaatee sidii si lamid ah cidi maysan kicin, mana ajiibin dhawaqa jihaadka. Kadib maalintii afraad ayuu Cumar sidii si lamid ah dadkii u khudbeeyay oo ku booriyey jihaadka, markaa baa waxaa kacay Abuu Cubeydah bin Mascuud Ath-Thaqafi, oo nin dhalin yaro ah, dabeetana dadkii baa iska daba kac kacay jeer la helay ciidan, markaasuu Cumarna masuul uga dhigay Abaa Cubeydah bin Mascuud, oo markaa aan ahayn saxaabi, raggii saxaabada baa Cumar weydiiyeen:" Oo maad u magacawda ciidanka nin saxaabadii Rasuulka SCW kamid ah? Markaasuu Cumar yiri:" Waxaan uun magacaawi kii ugu horeeyay ee ajiibay dhawaqa jihaadka, adinkuna waxaad tahiin kuwa ku hor maray gargaarka diinta Islaamka (yacni gelideedda). Kadib Cumar waxuu u dardaarmay ciidankii guud ahaan , gaar ahaanna Abuu Cubeydah bin Mascuud cabsida Allaah iyo inuu la tashado ragga saxaabada Rasuulka SCW ee la socda isaga, gaar ahaanna waxuu amray inuu la tashado Suliidh bin Qeys Al Ansaari, waxuuna Cumar yiri:" Waa nin aad arrimaha dagaalka u yaqaanno''. Kadib ciidamadii Muslimiinta way dhaqaaqeen oo waxay abbaareen dhankii Ciraaq iyagoo tiradoodu ay markaasi tahay 7 000. Markaa buu Cumarna warqad u diray dhanka Shaam iyo masuulkii halkaasi ku sugnaa ee Abuu Cubeydah bin Al jarraax, taasoo uu kaga dalbanayo in ciidamadii Khaalid bin Waliid ee kasoo dagaallamay dhulka Ciraaq uu dib ugu celiyo, bacdamaa Yarmuuk lagu guuleystay. Dabeeto Abuu Cubeydah bin Al Jarraax waxuu diyaariyey ciidan culus oo uu u diro dhanka Ciraaq isagoo fulinayo amarka amiirkii Mu'miniinta ee Cumar bin Al Khaddaab, waxuuna diyaariyey 10 000 oo ciidan ah oo uu madax uga dhigay Haashim bin Cutbah bin Abii Waqaas Az Zuhri. Cumar ibnu Al Khaddaabna waxuu soo diray ciidan kaloo gurmad ah oo u badan reer Bujeylah oo uu hoggaaminayo Jariir bin Cabdillaahi Al Bujali.
Ciidamadii Abuu Cubeydah bin Mascuud markay gaareen dhulka Ciraaq, waxay la kulmeen iyadoo Faarisiintii ay xaaladi ka dhex aloolsantahay oo ay ku xad gudbeen boqorkoodii ayna dileen, waxayna ka fursan waayeen inay madax ka dhigtaan gabar la oran jiray Buuraan bint Kisraa (Barwiiz/ Abarwiiz), kadib markay dileen mid iyada ka horreysay oo la oran jiray Aazarmiidakhat bint Abarwiiz. Buuraan waxay heshiis la gashay nin la oran jiray Rustum bin Farakhzaad si haddii uu is hor taago dagaallada iyo weerarada ay Muslimiinta dhulka Furus kusoo qaadeen uu markaa qabanayo xilka boqornimada muddo 10 sanadood ah, kadibna uu usoo celin doona reer Kisraa, arrintaasina waa uu ku qancay Rustum. Waxuu Rustum ahaa mid xiddigaha wax ka sheeg sheego oo waxuu ahaa Saaxibun Najam, isagoo hadal hayo in ay muddada 10 kaasi sano u buuxsami doonin ayay dadkiisii weydiiyeey:" Maxaa haddaba kugu xambaarayo inaad sidaa fasho? Yacni waxay ula jeedaan in aad heshiis noocaas gasho adigoo aaminsan inaysanba kuu buuxsameyn oo aadanna hor istaagi karin ciidamadan Muslimiinta? Markaasuu yiri:" Waa uun iga damac iyo sadano doon yacni sharaf doon''.
Markaa buu Rustum soo diray ciidan uu hoggaaminayo amiir la oran jiray Jaabaan, ciidankiisu labada dhinacna waxaa kala hoggaaminayey labo nin oo midi la oran jiray Jashnash Maah, kan kalena waxaa la oran jiray Mardaan Shaah. Waxay is heleen ciidankii Abaa Cubeydah bin Mascuud oo ay isku heleen goob la yiraahdo Numaariq oo u dhaxayso Xiirah iyo Qaadisiyah. Fardooleyda Muslimiintuna waxaa hoggaaminayey Muthanna bin Xaarith, ciidanka bidixdana waxaa hoggaaminayey Camr bin Al Heytham. Kadib waxaa halkaa ku dhex maray dagaal aad iyo aad u daran oo lagu jebiyey Faarisiintii, laguna soo qafaashay Mardaan Shaah iyo Jaabaan. Ammaa Jaabaan waxaa dilay ninkii soo qafaashay, Mardaan Shaahse isagu waxuu qayaamay ninkii soo qafaashay markaasuu iska sii daayey, haddana mar kale waxaa soo qabtay ciidankii Muslimiinta, waxayna ula yimideen amiirkii ciidanka ee Abuu Cubeydah bin Mascuud waxayna ku yiraahdeen:" Waa amiirkii ciidanka Furuse ee dil''. Isagiina Abuu Cubeydah waxuu yiri:" Haddii uuba amiirkii ciidanka yahay anigaa dilaya''. Unuunka ayuuna u dheereeyay. Waxaa kaloo la sheegaa in uu nin Muslimiinta kamid ah magan geliyey. Dabeeta Abuu Cubeydah waxuu daba kacay raadka kuwii jabay oo uu wax badan ka laayey, maal badanna ka ritay, siduu u eryanayey ayayna ka dul dhaceen magaallada Kaskar oo uu madax ka ahaa wiil uu dhalay boqorkii hore ee Kisraa abtigiis, kaasoo la oran jiray Narsii. Kadib Narsii waxuu soo saaray reer Furus isagoo ku boorinayo la dagaallanka ciidanka Abuu Cubeydah bin Mascuud, waxaana dhex maray dagaal uu Alle ku jebiyey cadawgii Muslimiinta ee reer Furus, waxayna halkaas Muslimiintii ka qaniimeysteen qaniimo tiro badan, falillaahil Xamdu.
Khumuskii qaniimada iyo hantidii halkaa laga helay ayuu Abuu Cubeydah u diray dhankii amiirkii Mu'miniinta ee Cumar bin Al Khaddaab.
Kadib waxay isku heleen ciidamadii Muslimiinta iyo kuwii Narsii meel u dhaxayso Kaskar iyo Safaadhiyah, iyadoo ciidamada midigta iyo bidixda ee Narsii ay kala hoggaaminayaan labo nin oo uu dhalay abtigiis oo la kala oran jiray Bandaweyhi bin Nadhaam (ama bin Nasdhaam) iyo walaalkiis Beyraweyhi bin Nadhaam. Rustumna wuxuu diyaariyey ciidan kale oo uu madax uga dhigay nin la oran jiray Jaalinuus, si uu dhanka Narsii ugu soo diro gurmad ahaan. Haddaba markii uu Abuu Cubeydah arrintaa ka war helay ayuu ku deg degay inuu weerar culus ku qaado Narsii ka hor intuusan soo gaarin ciidanka Jaalinuus. Markaasuu weeraray, waxaana dhex maray dagaal culus oo lagu jebiyey ciidankii Narsi, kadibna Abuu Cubeydah iyo Jaalinuus baa waxay isku heleen goob la yiraahdo Baaruusimaa, waxaana ku dhex maray dagaal durtaba lagu jebiyey Jaalinuus iyo ciidamadiisii oo uu weliba la socday Narsii, markaasay orad ku galeen magaalladoodii Madaa'in.
Kadib Abaa Cubeydah bin Mascuud wuxuu diray Muthanna bin Xaarith iyo sirriyaad (wardoonno) kale oo uu dhan waliba u diray. Xoog iyo heshiis ayayna ku kala furteen hareerahooda. Kadib khumuskii qaniimada ayuu Abuu Cubeydah u diray dhankii Madiina iyo amiirkii Mu'miniinta ee Cumar bin Al Khaddaab.
Kadibna waxaa isla dhulka Furus ka dhacay.. Dhacdadii Jasar
Markii uu Jaalinuus ka dul dhacay boqortooyadoodii ayay Faarisiintii is dhaarsadeen oo ay soo direen ciidan culus oo uu hoggaaminayo Bahmas Jaadaweyhi, waxuuna Rustum usoo dhiibay calanka lagu magacaabo Darfash Kabyaan. Misna waxaa kaloo uu u dhiibay raayad yacni calan kale oo uu lahaa boqorkii hore ee Kisraa kana sameysneed maro xariir ah oo lagu qurxiyey yaaquut iyo murjaan, waxayna ahayd siddeed dhudhun dhererka iyo ballac. Waxay markaa kadib Faarisiintii udhaqaaqeen dhankii Muslimiinta iyo ciidamadii Abaa Cubeydah, waxaana labada qola kala dhex galay webiga Furaat, markaasay Faarisiintii soo cid dirsadeen iyagoo leh:" Inoo soo gudba ama aanu idiin soo gudubna? Markaasay Muslimiintii amiirkoodii ku yiraahdeen:" Amar ha inoosoo gudbaane''. Waxuuse ugu jawaabay:" Nagama jeclo geerida, innaga ayaana u gudbeyna''.
Kadib way u gudbeen, waxayna isku heleen goob ciriiri ah, oo dagaal darani ku dhex maray, kaasoo horey aysan Muslimiinta isagoo kale ugu tashan una arag. Muslimiintu waxay maalintaa ahaayeen kudhawaad 10 000, gaaladuse way ka tira badnaayeen, waxayna wateen reer Furus maroodiyaan tiro badan oo ay ku argagax gelinayeen fardaha Muslimiinta. Mar alliyooy weerar qaadaan fardooleyda Muslimiinta dib bay u soo noqonayeen fardaha oo sina uma galeyn goobta dagaalka iyagoo ka argagaxaya maroodiyaasha ay maalintaa Faarisiinta lasoo dagaal tegeen. Faarisiintii waxay maalintaa Muslimiinta oodda uga qaadeen gamuun oo ay halkaas kaga laayeen tiro badan, markaasuu amiirkii ciidankaasi Muslimiinta ee Abuu Cubeydah amray in marka hore la laayo maroodiyaasha, markaasay laayeen isaga iyo halyeeyadii Muslimiinta, waxaana jirey maroodi weyn oo cad kaasoo hoggaaminayey maroodiyaasha, kii ayaana soo haray markaasuu Abuu Cubeydah dhankiisii u dhaqaaqay si uu maroodiganna u dilo, markaasuu kharduumka seyf ku dhuftay oo xanuunjiyey, markaasuu maroodigii xanuunsaday oo qayliyey, suu Abuu Cubeyda ku istaagay oo dilay, halkaas ayuuna ku shahiiday amiirkii ciidankaas Muslimiinta. Kadib waxaa hoggaankii ciidanka qabtay amiirkii uu horey Abuu Cubeydah ugu dar daarmay inuu qabto haddii isaga la dilo, kadib buu weeraray qaaday jeer isagiina la dilay, misna waxaa qaaday amiir labaad oo Abuu Cubeydah u dardaarmay, kiina waala dilay, mid kale ayaa qaaday isagiina la dil, jeer ay halkaas ku shahiideen 7 amiir oo iskaga kala dambeysay hoggaanka kuwaasoo uu Abuu Cubeydah horey usii magacaabay haddii midi la dilo inuu midka kale hoggaanka qabto. Kadib waxaa qabtay amiirkii siddeedaad ee uu Abuu Cubeydah u dardaarmay, waxuuna ahaa Muthanna bin Xaarith bin Salamata As Sheybaani.
Waxaa la sheegaa in ay Doomah haweeneydii Abuu Cubeydah bin Mascuud ay ku riyootay riyo ah in ay dhacdadu ku noqon doonta mid bar bar dhac ah, markay arrintaas Muslimiintii maqleen bay daciifeen oo itaal darreeyeen, waxayna ku rajo weynayeen markii hore guul furasho iyo inay si ba'an u layaan cadawga, hase ahaatee niyad jabkoodii waxuu dhalay inay in badan oo kamid ah jabaan, in kaloo badanna ay webigii ku hafteen , dar kalena uu cadawgii laayey. Waxaa la sheegaa in maalintaas ay webiga ku hafteen ku dhawaad 4000 oo Muslimiin ah. Fa innaa lillaahi Wa innaa illeyhi Raajicuun. Waxaa la sheegaa qofkii ugu dambeeyay ee Muslimiinta maalintaa iyada ah laga dila ama ka shahiida inuu ahaa Suliidh bin Qeys bin Camr bin Cubeydullaah bin Maalik bin Cadiyi bin Caamir bin Qanam bin Najaar Al Najjaari. Waxaa abti u ahaa Ascad bin Zaraarah, hooyadiina waxaa la oran jiray Ragheybah bint Zaraarah bin Sacad bin Cubeydullaah.
Dhanka kale Muslimiintu maalintaa waxay iyaguna cadawgu ka dileen tiro badan oo waxay goobtaa dhigeen 6000. Markii uu jabka soo gaaray ciidamadii Muslimiinta bay buundadii isku cidhiidhiyeen, deetana ay jabtay, taasina waa tii dhashay inay in badan webigii ku hafteen. Kadib buu Muthanna daraf kamid ah buundadii istaagay oo cod aad u dheer ku qayliyey isagoo Muslimiintii la hadlayo, waxuuna amray inay tartiibsadaan jeer uu buundadu uga hagaajiyo, kadibana isaga iyo qaar kamid ah halyeeyadii Muslimiinta ayaa buundadii hagaajiyey oo dabeetana si fudud bay ku mareen.
Ciidamadii Muslimiinta intii sugnaatay maahe, kuwii kale waxay u qayb sameen kuwa iyagu jiha ay u socdaan garan waayey iyo kuwa toos u abbaaray dhankii Madiina iyo Amiirkii Mu'miniinta.
Warka dhacdadan waxaa magaallada Madiina geeyay oo ugu horeeyay Cabdullaahi bin Zeyd bin Caasim Al Maaziniyu oo isagu masjidka soo galay goor uu Cumar mimbarka fuushanyahay oo uu dadka u khudbeynayey. Waxuu yiri:" Maxaa ku keenay Cabdullaahi ibnu Zeydoow!!? Waxuu yiri:" Amiirkii Mu'miniintoow! waxaa kuu yimid war dhab ah''. kadibna mimbarkii buu ugu korey oo si hoos ah warkii ugu sheegay.
Waxaa kaloo la yiraahdaa waxuu ahaa ninkii warka magaallada Madiina gaarsiiyey Cabdullaahi bin Yaziid bin Al Xuseyn Al Xadhmiyu, wallaahu Aclam.
Cumar bin Al Khaddaab ma uusan canaanan kuwii iyagu jabay ee ka dul dhacay Madiina, bal ee waxuuba ku qaabilay waji sami iyo soo dhaweyn isagoo yiri:" Waa aniga kan aad xaggiisa soo ciirsateen, Majuustiina Alle arrinkoodii waa ka shuqliyey''. Waxuu ula jeeday Furus oo ku xad gudubtay boqorkoodii Rustum oo misna mar kale soo celsheen oo ku lifaaqeen Al Feyruzaan, iyagiina ay u qabysameen labo qaybood. Kuwii ka jabay Jassar iyagu waxay u baxsadeen dhankii Al Madaa'in, markaasuu Muthanna sii raacdeystay, kadib baa waxaa usoo baxay labo amiir oo kamid ah Faarisiinta iyo ciidan ay siteen, kadibna waa lasoo qafaashay labadoodiiba iyo dad badan oo kamid kuwii ay wateen, dhammaantooduna kurka in laga ayuu Muthanna amray.
Kadib waxuu warqad u diray madaxdii Muslimiinta ee ku sugneed Ciraaq sida Bashiir bin Khassaasiyah iyo kuwa kale si ay gurmad ugu soo diraan, iyagiina way usoo direen, waxaa misna soo gaaray ciidankii uu Cumar bin Khaddaab horey ugu soo diray dhanka Abuu Cubeydah bin Mascuud oo uu hoggaaminayey Jariir bin Cabdullaahi Al Bujali oo ay la socdeen saadaaddii Muslimiinta iyo rag akhyaar ahaa.
halkaa ayuu ciidan aruursi ka waday Muthanna jeer uu markii dambe helay ciidan culus.
Seyf bin Cumar waxuu yiri:" Dhacdadani waxay dhacday bishii Shacbaan, goor laga jooga dagaalkii Yarmuuk 40 casho, sanadkan dhexdiisa, yacni sanadka 13aad ee Hijriga.
Madaxdii Furus ayaa waxay maqleen ciidan aruursiga Muthanna bin Xaarith markaasay soo direen ciidan uu hoggaaminayo amiir la oran jiray Mahraan, waxayna isku heleen labada ciidan goob la yiraahdo Buweyb una dhaw halka ay maanta tahay magaallada Kuufa, waxaana u dhaxeeyo kaliya webiga Furaat.
Kadib waxay yiraahdeen Faarisiintii:" Ama inoosoo gudba ama aanu idiin soo gudubno? Muslimiintii oo dhegahoodu ay ka guuxayaan waxii ku qabsaday dhacdadii Jassar ayaa waxay ku yiraahdeen:" Mayee idinku inoosoo gudbo'', markaasay soo gudbeen.
Ammintu waxay ahayd bishii Ramadaan ee sanadkan, markaas buu Muthanna amray ciidamadii Muslimiinta inay affuraan si ay ugu ad adkaadaan cadawga. Waxuuna dhisay ciidankiisii oo raayad raayad u xidhay isagoo qolo waliba raayad qaas ah u dhiibay, kadibna inta uu dhex qaaday ayuu koox waliba u dar daarmay oo ku booriyey jihaadka iyo sabar iyo sugnaan iyo inay ku dadaalaan aamusnaanta. Qowmku waxaa ku jiray rag halyeeya ah oo ay kamid ahaayeen Jariir bin Cabdillaahi Al Bujali iyo saadaaddii Muslimiinta. Markaa buu Muthanna ciidankii la hadlay oo ku yiri:" Anigu waxaan takbiirsan doonaa (yacni oron doonaa Allahu Akbar!) saddex goor ee diyaar garooba, marka afraad-na weerarka ku qaada''. Muslimiintiina waxay hadalkii Muthanna ku qaabileen maqal iyo adeecid. Markii uu Muthanna takbiirsaday takbiirtii kowaad bay Faarisiintii weerar culus soo qaadeen, waxaana dhex maray dagaal aad u kulul, markiina uu arkay Muthanna safafkii Muslimiinta oo dabcaya ayuu soo diray nin cod dheer ku qaylinaya oo dadkii ku booriyey jihaadka. Markii ay muddadii dagaalku dheeraatay ayaa isaga Muthanna iyo asxaabtiisii waxay Alle ka baryeen inuu lib iyo guul ka siiyo cadawgooda oo uga gargaaro. Kadib wuxuu Muthanna kaxaystay rag kamid ah halyeeyadii Muslimiinta oo weerar darani ku qaaday dhankii Mahraan oo durkiyey ciidankii midigta ee Furus, waxaana Mahraan dilay wiil kamid ah Carabtii Nasaareyda kana dhashay banii Taqlab, oo faraskiisiina ka furtay. Sidaa waxaa xusay Seyf bin Cumar.
Ibnu Isxaaq waxuu isaguna leeyahay:" Waxuu ahaa ninkii Mahraan dilay Al Mundir bin Xassaan bin Diraar Al Dhabyu, kaasoo waran la riday, kadibna Jariir bin Cabdullaahi Al Bujali baa madaxa ka gooyey, markaasay isku qabsadeen hubkiisii, waxaase markii dambe qaatay Jariir bin Cabdullaahi Al Bujali.
Majuustii waa ay jabeen, markaasay Muslimiintiina firxadkoodii raacdeysteen oo ay laayeen, Muthanna bin Xaarithana wuxuu uga hor maray buundadii si aysan u gudbin oo Muslimiintu u laayaan. Maalintaa iyada ah iyo habeenkeedii ayay Muslimiintu raacdeysanayeen fiigoodii oo waxay helaanba laynayeen. Waxaa la yiraahdaa:" Dhacdadaasi wixii ay dileen Muslimiinta iyo kuwii webiga ku qarqaday isku dar waxay noqdeen 100 000 (boqol kun) Falillaahil Xamdu.. Halkan waxay Muslimiintii ka qaniimeysteen qaniimo aad u tiro badan oo aan la soo koobi karin, kadibna bishaaradii iyo khumuskii qaniimada ayaa waxaa loo diray dhanka amiirkii Mu'miniinta ee Cumar bin Khaddaab.
Dhanka kale Muslimiinta waxaa looga dilay dhacdadaan tiro badan, waxayna dhacdadani ahayd mid loogu gogol xaarayo in laga takhalluso boqortooyadii Furus ee boqollaalka sano dunida ka talineysay. Muslimiintii waxay tamkiiniyeen dhul aad istaraatiiji u ah oo ah nawaaxiga labada webi ee Dajlah iyo Furaat. Dhacdadan Buweyb ee iyadu ka dhacday dhulka Ciraaq waxay u dhigmataa dhacdadii Yarmuuk ee ka dhacday dhulka Shaam.
Furus oo Boqortay Yazdajrid
Boqorkii hore ee Sheyriin ayaa reer Kisraa inta isku soo aruuriyey qol ku xiray dabeetana wada laayey raggoodii oo daayey dumarkoodii. Yazdajrid hooyadiis waxay kamid ahayd dadyowgaasi la soo qab qabtay ee iyagu la doonayey in wiilashooda iyo raggoodu la laayo, waxayna markaa wadatay wiilkeeda Yazdajrid oo markaasi kuray yar ahaa. Kadib bay si hoos ah abtiyaashii ugu yeeratay oo ka dalbatay inay wiilkeeda u qariyaan, iyagiina intay qaadeen bay deegaankooda la aadeen. Markii ay dhaceen wixii dhacay ee aanu soo tilmaannay sida dhacdooyinkii Jassar, Buweyb iyo dhacdooyinkii lamidka ahaa, la dilayna wixii la dilay ee madaxdii Furus kamidka ahaa, iyo in weliba firxadkoodii raacdo lagu hayo oo dhul badan oo istaraatiiji ahina laga qabsaday ayay arrintaasi baaseysteen reer Furus. Waxay garan waayeen halka ay cilidi ka jirto, goor ay sidaa yahiin ayay maqleen in uu Cumar soo diray Sacad bin Abii Waqaas iyo ciidama uu hoggaaminayo. Markaasay madaxdoodii shir u fadhiisteen, waxayna keeneen labadii ugu sarreysay hoggaanka Furus ee kala ahayd Rustum iyo Feyruzaan, kadibna waxay ku dul akhriyeen dar daaran iyo goodis isku dhafan, waxayna ku yiraahdeen:" Haddaydaan u istaagin dagaalladani waanu idin dileynaa labadiinnuba''. Kadib qeyb kamid ah madaxda ayaa waxay keenen ra'yi ah in dumarkii reer Kisraa meel waliba la isaga yeero oo la weydiiyo tii hayso wiil reer Kisraa ah''. Mid waliboo kamid ah dumarkii reer kisraa marka la weydiiyo inay dhashay wiil, way inkireysay iyadoo u baqayso in laga dilo. Sidaasi kama aysan suulin jeer markii dambe ay keeneen Ummu Yazdajrid iyo wiilkeedii Yazdajrid, markaasay wiilkeedii Yazdajrid boqreen isagoo 21 jir ah, waana wiilkii uu dhalay boqorkii hore ee Kisraa (boqor Shahrayaar), waxayna casileen Bowraan bint Kisraa, taasoo iyadu hoggaanka kula heshiisay markii hore Rustum. Reer Furus aad bay ugu farxeen boqridda Yazdajrid waxayna la hor istaageen hiil iyo hoo aan lala dhicin, waxayna madaxdii Furus warqado u dirsadeen goballadii dhulkooda si ay u maqlaan una adeecaan boqorka cusub, iyagiina raynrayn iyo riyaaqid ayay ku qaabileen. In badan oo dadkaasi kamid ah baana ballamahii ay horey Muslimiinta ula galeen ka baxay, iyagoo aaminsan inay awooddii Furus imminka soo laabatay, maadaama reer Kisraa dib loosoo celiyey. Tanina waxay noqotay mid ay ku kedsoomeen sidaynuba arki doonna hadduu Alle idmo.
Muslimiintii goobahaa kusugnayd baa dib loosoo riixay, markaasay iyagiina warqad u dirsadeen dhankii amiirkii Mu'miniinta ee Cumar bin Khaddaab iyagoo ogeysiinayo xaaladda sida ay tahay. waqtigaasi wuxuu ahaa dhammadkii sanadkan yacnii 13-kii Hijriga Bishii Dul Qacdah, markaasoo uu Cumar soo amray inay ku sugnaadaan darfaha dhulka Furus.
Sida dhabta ahi ee ay badi culimaayi Siirah qabaan, waxay tahay inuu Cumar diray Sacad sanadkii 14aad ee hijriyada, sida aynu arki doonno Alle idinkii. Imminkuna aanu u weecanno dhankaa iyo dhul furashadii Shaam, dhacdooyinkii sanadkan 13aad ee Hijriga.
Markii ay ciidamadii Muslimiinta furteen Yarmuuk, kadib buu Khaalid ku dul akhriyey ciidankii warqaddii ka timid Madiina iyo dhankii Cumar, taasoo caddeyneysay geeridii ku timid khaliifadii Rasuulka SCW ee Abuu Bakar iyo in uu khilaafadii qabtay Cumar bin Al Khaddaab iyo in weliba imaaradda Shaam masuul looga dhigay Abuu Cubeydah bin Al-Jarraax, Khaalid-na uu ku xigeyn u noqdo. Haddaba markaas bay dhaqaaqeen Abuu Cubeydah iyo Khaalid iyo ciidamadoodii oo ay Maraj Sufur aadeen iyagoo qorashahoodu ahaa in ay go'doomin ku sameeyaan Dimishiq, Yarmuuk-na waxaa lagu dhaafay fardooley uu hoggaaminayo Busheyr bin Kacab, Goor ay ciidamadii Muslimiinta ku suganyahiin goobta Maraj Sufur ayaa waxaa u yimid khabar ah in uu cadawga gurmad uga yimid dhanka Ximsa iyo in koox tiro badan oo Ruumaan ahna ay iskugu tegeen Fixli oo ka mid ah dhulka Falastiin (goobta Ardul Ghowr). Waxuu markaasi Abuu Cubeydah kala garan waayey tii uu ka billaabi lahaa Dimishiq ama Fixli. Markaas ayuu warqad u diray amiirkii Mu'miniinta ee Cumar bin Khaddaab, taasoo uu kala tashanayo tii uu ku hor mari lahaa. Haddaba markaa ayaa waxaa timid jawaabtii Cumar oo uu soo amray in ay ka billaabaan Dimishiq, waayo waa xaruntii Ruumaanka iyo gurigii boqortooyadooda, waxuuna amray in uu Fixil u diro koox fardooley ah oo sii mashquuliso waxuuna yiri:" Haddii uu Alle idiin furo Fixli kahor intaan Dimishiq la furan, waa sidaanu jecleyn, haddiise Dimishiq aad hor furataan, uga teg Dimishiq masuul oo adiga iyo ciidankaada ku dhaqaaqa dhanka Fixil. Haddii aad Fixil furataanna adiga iyp Khaalid aada dhanka Ximsa, Camr iyo Shuraxbiilna ku dhaaf Urdun''.
Seyf bin Cumar waxuu leeyahay:" Wuxuu Fixil u diray ciidan uu hoggaaminayo Camaarah bin Makhshiyi, waxuuna ka diray goobta Maraj Sufur, markaasay is heleen koox fardooley ah oo Ruumaan ah oo tiradoodu tahay 80000 ( siddeetan kun), dabeeto way furteen ka hor intaysan Dimishiq furan. Gadaal ayaanse ka xusi doonnaa dhacdadii Fixli iyo ciddii hoggaaminaysay sida ay Mu'arrakheenta qaarkood kayiraahdeen, hadduu Alle idmo.
Kadib Abuu Cubeydah waxuu diray ciidan uu madax uga dhigay Dil-Kulaac, waxuuna u diray inta u dhaxayso Dimishiq iyo Ximsa, si aysan wax gurmad ah u soo gaarin reer Dimishiq, misna waxuu diray ciidan kale oo uu u diray Falastiin iyo Dimishiq dhexdooda si ay iyana wax gurmad ah usoo gaarin reer Dimishiq. Dabadeedna waxuu ka dhaqaaqay Maraj As- Sufur isagoo kusii jeedo dhanka Dimishiq si uu go'doomin adag ugu qabto, waxuuna dhisay ciidankiisii isagoo dhaxda madax uga dhigay Khaalid bin Waliid, Camar ibnul Caasna labada dhinac mid kamid ah ayuu u dhiibay. Ciidanka Farooleyda waxuu madax uga dhigay Cayaad bin Qanam Al Fihri, kuwa lugtana waxuu u dhiibay Shuraxbiil ibnu Xasana isaguna Abaa Cubeydah waxuu hoggaaminayey labada dhinac mid kamid ah. Kadib way dhaqaaqeen, oo dul degeen Dimishiq oo go'doomin daran ay kuqabteen, waxaana markaa Dimishiq madax ka ahaa boqor la oran jiray Nasdhaas bin Nasdhuus. Ciidankii Khaalid waxay degeen dhanka bariga albaabka Keysaan, Abuu Cubeydana waxuu degay dhanka albaabka Jaabiyatul-Kabiir, Yaziid bin Abii Sufyaan iyo ciidan uu hoggaaminayeyna waxay degeen dhanka albaabka Jaabiyatus-Saqiir, Camr ibnu Al Caas iyo Shuraxbiil-na waxay degeen albaabadii kalee magaallada. Waxay Maalintaa ciidamada Muslimiinta xireen manjaniiq oo ay rideen dabaabaat, waxayna go'doomiyeen go'doomin tii u darneyd, waxaana lasheegaa inay go'doomintaasi ku hayeen muddo 70 casho, waxaa kaloo la yiri muddo 4 bilood, mise 6 bilood ama waxaa kaloo la yiri 14 bilood, wallaahu aclam.
Reer Dimishiq way diideen inay soo baxaan, waxayna u gurmad dirsadeen boqorkoodii Hiriqal, si uu ugu soo gar gaaro ciidamo gurmad ah, hase ahaatee ciidamadii gurmadka ahaa ee uu soo diray ma aysan soo gaarin, oo waxay soo dhaafi waayeen kuwii uu Abuu Cubeydah dhexda dhigay ee Dil Kulaac. Markii ay reer Dimishiq yaqiinsadeen inuusan gurmad soo gaari karin, bay xaaladdu aad ugu darraatay, oo ay daciifeen, Muslimiintiina go'doomintii bay sii adkeeyeen, waxana la galay waqtigii Jiilaalka oo qabow darani yimid, xaaladdiina ay Muslimiintii ku adkaatay, markaasuu Illaahay qadaray in wiil loo dhalo boqorkii magaalada, markaasuu xaflad heer sara ah sameeyay oo khamri la wada cabbay, markaasay wada daateen dadkii iyagoo wada sakraansan oo ay wada seexdeen.
Amiirka ciidamadii fadhiyey albaabka Keysaan ee Khaalid bin Al Waliid wuxuu ahaa mid aanan seexan oo aan la seexinin, waxuu ahaa halyeey habeennada dagaalka soo jeedo. Waxuu dareemay daganaashaha caawo ka muuqda dhanka cadawga iyo shanqadh la aanta xaggooda, markaasuu damcay inuu war jeefo, hase ahaatee waxaa u dhaxeeyay gidaar aad u weyn iyo god meesha ka qodnaa oo biyo ah. Khaalid waxuu soo kaxaystay qaar kamid ah sanaadiidii iyo halyeeyadii ciidanka oo ay kamid ahaayeen Al qacqaac bin Camr iyo Al Macduur bin Cadiyi iyo qeyrkooda, waxayna soo dhex jibaaxeen toggii oo ay dabaal kusoo gudbeen, markiina ay soo gaareen gidaarkii, ayaa waxay tuurteen xargo oo ay ku qabsadeen biro meesha gidaarka ku yaallay, markaasay ku koreen jeer ay dhinaca kale uga degeen. Markaasay laayeen waardiyaashii goobtaa joogay iyo wixii meesha ka dhawaa oo dad ah, dabeetana albaabkii bay fureen, markaasay ku dhawaaqeen takbiir (Allaahu akbar) dabeetana waxaa yimid ciidankii Khaalid ee albaabka Keysaan fadhiyey markii ay soo galeen bay laayeen, wixii ay arkaanba oo magaaladi dhan dhex qaadeen.
Dadkii magaallada markay maqleen takbiirtii Muslimiinta ayay iyagoon waxba garaneynin u kala ordeen albaabadii, koox kastoo albaabkii Keysaan xaggiisa u oradaana ma aysan sii noolaan, oo waxaa la dilay dil kii u darnaa, waxaana ka shaqeeyay ciidamadii Khaalid bin Waliid, kuwii kalena ee dadkaasi meeshaa deganaa waxay u carareen dhankii albaabadii kale, markaasay Abuu Cubeyda iyo amaraa'di kale ka fureen oo ay heshiis ka dalbadeen, markaasay magaalladii heshiis kusoo galeen. Waxayna bartama magaallada ku kulmeen Khaalid oo dhankiisa xoog kusoo furtay, markaasay ku yiraahdeen:" Raggu waanu la heshiinnay''. Markaasuu isagiina yiri:" Aniguna xoog ayaan kusoo furtay oo wax heshiis ahna ma ina dhex marin''. Halkii ayuuna kur goyntii cadawga kasii waday.
Abuu Cubeydah ayaa la hadlay Khaalid oo u tilmaamay inuu dagaalka joojiyo maadama uu la heshiiyey dadka, Khaalidna waa uu maqlay oo adeecay. Madaxdii ciidamada Muslimiinta waxay ku kulmeen meel ay ku taallay kaniisad la oran jiray Al Maqsilaadh.
Magaallada Dimishiq culimadu way isku khilaafaan, ma heshiis baa lagu furtay ama xoog? Waxaysa badankoodu ku kulmiyaan in Dimishiq lagu furtay bar heshiis, barka kalena xoog, waana sida ay badi qabaan culimada taariikhda wax ka qorta. Waxaa lagu xukmiyaa in barka Khaalid bin Waliid lagu furtay xoog, barka kalee madaxdii kalena lagu furtay heshiis. Haddaba sidaa iyada ahi magaallada waxaa ku yaallay 15 kaniisadood, oo ay ugu weyneed kaniisad la oran jiray Yuuxannah, labo qaybood ayaana loo qeybiyey Kaniisaddaasi Yuuxannah oo bar kamid ah waxaa laga dhigay masjid, barka kalena kaniisadnimadeedii ayay ku baaqi noqotay. Sidii kaniisadda loo kala qaybiyey ayaana magaalladii loogu xukmay in barkeeda lagu furtay heshiis barka kalena xoog iyo seyf.
U Diriddii Khaalid ee Dhanka Al Buqaac Kadib baa Abuu Cubeydah waxuu Al Buqaac u diray Khaalid, markaasuu seyf ku furtay. misna waxay goobta Ceynu Meysuun isku heleen ciidamo Ruumaan ah oo uu hoggaaminayo nin la oran jiray Sinaan oo waxaana dhex maray dagaal, halkaanna waxaa Muslimiinta uga shahiiday jamaaco badan, sidaa baana meeshaa mardambe loogu baxshay Caynush-Shuhadaa. Kadibana waa ay jabeen cadawgii Ruumaanka.
Waxuu Khaalid halkaa kula heshiiyey reer Baclabak..
Kadib Abuu Cubeydah waxuu magaalladii Dimashiq uga tegay Yaziid bin Abii Sufyaan, kaasoo isagu markii hore ku wajahnaa jihadeeda. Yaziid-na waxuu diray sirriyad ama wardoon uu hoggaaminayo Dixyah bin Khaliifah Al Kalbi oo uu u diray dhanka Tadammur si uu arrinkeeda dhan ugu tuuro, waxuu kaloo misna diray Abuu Zahraa Al Qusheyriyu oo uu udiray dhanka Bathaniyah iyo Xowraan, waxuuna ku furtay heshiis. Qaryooyinkii ku teedsanaa Dimishiq oo idil waxaa badi lagu furtay heshiis, gacanta Yaziid bin Abuu Sufyaan.
Khaliifah bin Khayaad wuxuu ka soo weriyey Cabdullaahi ibnu Muqiirah oo isaguna aabahiis kasoo weriyey inuu yiri:" Dhulka Urdun Shuraxbiil baa xoog ku furtay marka laga reebo Dabariyah oo uu ehelkeedii kula heshiiyey''.
Ibnu Isxaaq waxuu xusay in Baclabak iyo Ximsa la furtay sanadkii 14aad ee Hijriga bishii Dulqacda, laguna furtay gacanta Abuu Cubeydah bin Jarraax heshiis ahaan.
Culimo badan oo kamid ah Culamaayi Siirah waxay xuseen in Fixil la furtay ka hor Dimishiq sidaynu soo tilmaannay, waxaase qabo inay Fixil ka dambeysay Furushadii Dimishiq Al imaam Abuu jacfar Ibnu Jariir Ad Dhabari, sidaana waxaa ku raacay Seyf bin Cumar Al Tamiimi sida ku sugan siyaaqadiisa oo ay kasoo weriyeen Abii Cuthmaan Yaziid bin Useyd Al Ghasaani.
Waxay soo min guuriyeen in markii la furtay Dimishiq lagu dhaafay Yaziid bin Abii Sufyaan, ciidankii kalena ay aadeen dhanka Fixil, waxaana ciidankan Fixil u baxay hoggaaminayey Shuraxbiil bin Xasana, ciidanka hore waxaa madax looga dhigay oo hoggaaminayey Khaalid bin Waliid, kuwa midigtana waxaa hoggaaminayey Abuu Cubeydah bin Al Jarraax, dhanka bidixdana waxaa loo dhiibay Camr bin Al Caas, fardooleyduna Diraar bin Al Azwar (waxaa kaloo la sheegaa inuu Diraar kushahiiday dagaalladi aynu soo xusnay midkood). Ciidamada lugta waxaa hoggaaminayey Cayaad bin Qanam Al Fihri, guud ahaan ciidankaas oo idilna waxaa madax u ahaa Shuraxbiil bin Xasanah. Way dhaqaaqeen ciidamadan, waxayna abbaareen dhanka Fixli.
Markii ay Muslimiintii gaareen goobtaasi Fixli ee Ardul Qowr ayay Ruumaankii waxay isugu tegeen Beysaan, dabeetana waxay soo deeyeen biyahii dhulkaas oo iyagii iyo Muslimiintii kala dhex galay dhulkiina ka dhigay dhul dhiiqo badan oo cagtu qaban karin (waxaaba la sheegaa in sababtaasi darteed dhulkaas loogu baxshay Ardul Qowr, magacaasoo dhulkaasi markii dambe loogu yeeri jiray). Sidaynu soo xusnay guud ahaan ciidamada Muslimiinta waxaa madax u ahaa Shuraxbiil bin Xasana, gaalada Ruumaankuna waxaa hoggaaminayey Saqlaab bin Makhraaq, markaa bay Muslimiintii degeen, waxay dhowraanna waa sidii ay arrini ku dambeyn lahayd oo Rabbi ayay talo saarteen. Amiirkii ciidamadaasi Muslimiintuna waxuu ahaa mid digtooni xad dhaaf ah qabay oo xitaa hurdadiisu ay yareeyd, sidaa si lamid ahina ciidamadii Muslimiintoo dhami iyaguna xadrigoodu taam buu ahaa. Haddaba goor habeen ah bay Ruumaankii u maleeyeen inay Muslimiintu wada hurdaan, waxayna damceen inay soo dooxateeyaan oo wada laayaan, hase ahaatee waxay Muslimiintii u wada boodeen mar qura sidii boodidda uu mar kaliya boodo nin. waxaana dhex maray dagaal aad u kulul oo ilaa subaxii socday, misna subaxaas illaa uu gabalkii ka dhacay ayuu sii socday, markiina uu dhulkii madoobaaday gudcurkii habeennaad dartii bay Ruumaankii jabeen oo amiirkoodii Saqlaabna laga dilay. Muslimiintiina firxadkoodii bay sii eryadeen oo sii laynayeen jeer ay ka dul dhaceen biyahii ay markii hore iyagu soo daayeen, oo ay in badan oo kamidi ku harqadeen, darkaloo badan oo lagu qayaasay 80 000 ( Siddeetan kunna ) Muslimiintii baa laysay, Waxaa kaloo la sheegaa markii horeba inay tiradoodu ahayd 80 000, waxaana yaraa intii ka bad baadday, halkaasina waxay Muslimiintii ka heleen qaniimo fara badan iyo maal cusul. Abaa Cubeydah iyo Khaalid iyo intii la socotay baa markaa waxay u boqaalleen dhankii Ximsa siduuba amiirkii Mu'miniinta horey usoo amray, waxuuna Abuu Cubeydah Urdun masuul uga dhigay Shuraxbiil ibnu Xasana oo uu la socda Camr bin Al Caas. Kadib waxay go'doomin ku qabteen Beysaan jeer ay markii dambe dadkii deganaa u soo baxeen, waxaana dhex maray dagaal aad u weyn oo durtaba ay markii dambe heshiis dalbadeen, markaasuu kula heshiiyey mid lamida heshiiskii reer Dimishiq. Sidaa si lamid ahina Abul Acwar Al Sulami ayaa reer Dhabariyah kula heshiiyey.
SANADKII 14AAD Bilashadii sanadkani howlihii sidii hore waa ay ka fududaadeen, waxaanna soo qaadan doonnaa waxyaabahihii dhacay inagoo marba qaadaa dhigi doonno dagaalladii kasocday labada dhinac (Furus iyo Ruum).
Si ay markaasi inoogu fududaato inaanu fahamno qaabkii dhacdooyinka, anagoo marka mid qaadan doonno ayaa waxaan hadda ku hor mari doonnaa dagaalladii iyo dhacdooyinkii ka socday dhanka Furus oo sanadkii hore inoogu joogay ''BOQRIDDII YAZDAJRID''.
Billowgii sanadkan ayay ahayd markii uu amiirkii Mu'miniinta ee Cumar bin Khaddaab uu dadka ka dhex istaagay isagoo ku boorinayo jihaadka iyo dagaallada ka soconaya dhulka Ciraaq. Taasina waxay ahayd ka gadaal markii laga soo guddoomay muwaasimtii xajka ee sanadkii 13aad iyo kadib markuu maqlay wixii ciidamadii Muslimiinta kusoo gaaray dagaalkii Jassar iyo dilkii amiirkii ciidamadaas ee Abuu Cubeydah bin Mascuud Illaahay ha u naxariistee, iyo in waliba madaxdii Ciraaq badidoodii laga soo saaray goobahii ay horey u qabsadeen, in badan oo kamid ah dadkii jizyada dhiibayay ee horey Muslimiinta heshiiska ula galayna ay ballamahii ka baxeen, iyagoo ku kadsoomay boqorkii cusubaa ee ay Furus caleema saaratay, sidii isagoo usoo celin doono saldanadoodii iyo awooddoodii hore, oo uu hor istaagi karo huganka iyo guuxa Islaamka iyo ehelkiisa. Waasidaase waxay markaasi madaxdii Muslimiinta ee dhulkaasi ku sugneeyd warqad u dirsadeen dhanka amiirkii Mu'miniinta ee Cumar bin Khaddaab sidaynuba soo xusnay, taasoo ay ku ogeysiinayeen xaalladu sida ay tahay iyo in dhulal badan laga soo saaray, waxayna ka dalbadeen inuu gurmad culus u soo diro. Sababihii dhaliyey inuu Cumar horaantii sanadkan dadka ku booriyo jihaadka dhulka Ciraaq ayaa waxay ahaayeen kuwaas aanu soo xusnay. Markaa iyada ah buuna la dhaqaaqay ciidan culus oo uu isla isagu naf ahaantiisu hoggaaminayo. Ammintu waxay ahayd maalintii kowaad ee bishii Muxarram ee isla sanadkan, waxuu magaalladii Madiina kala dhaqaaqay ciidan culus oo uu isagu hoggaanka u hayo, magaaladii Madiinana waxuu ku dhaafay Cali bin Abii Dhaalib, waxuuna la dhaqaaqay ciidankiisii jeer uu gaaray goob la yiraahdo Suraar oo ah meel biyo leh, halkaas ayuuna dejiyey ciidamadiisii. Waxaa la socday ciidankaas halyeeyadii iyo culimadii saxaabada oo ay kamid ahaayeen Cuthmaan bin Cafaan, Sacad bin Abii Waqaas, C/Raxmaan bin Cowf iyo kuwa kale. Cumar waxuu amray in la addimo salaadda oo jamaaco lagu tukado, kadib buuna dadkii ogeysiiyey shir loo wada dhan yahay oo uu kala tashanayo inuu baxo iyo in kale, magaalladii Madiinana waa uu u cid diray si Cali loogu yeero oo uu showrada uga qayb qaato. Markii uu Cali yimid showradiina la billaabay badi saxaabadii waxay ku taliyeen in la baxo oo amiirka Mu'miniintuna uu ciidanka hoggaamiyo, raggii ra'yigaasi sida weyn ugu dhegnaa waxaa kamid ahaa Cuthmaan ibnu Cafaan iyo qaar kamid ah odayaashii saxaabada, hase ahaatee C/Raxmaan bin Cowf baa isagu taa caksigeeda la yimid, waxuuna isagu ra'yi ahaan qabay in amiirka Mu'miniinta uusan bixin oo uu booskiisa cid kale diro, waxuuna yiri:" Anigu waxaan arkaa (amiirkii Mu'miniintoow!) haddii lagu jebiyo, iney jab ku tahay oo ay taasi daciifin doonta Muslimiinta dunida oo idil, haddaba dir booskaada nin kale oo adigana iskaga laabo magaallada Madiina''. Cumar bin Khaddaab ra'yigaas buu qaatay, markaa bay dadkii lideen ra'yigii C/Raxmaan bin Cowf oo ku tilmaameen mid sahiifnimo ah. Waxuu yiri Cumar (isagoo ibnu Cowf la hadlayo):" Oo yaay kula tahay inaan dhulka Ciraaq u dirno?
Waxuu yiri:" Waad heshay?
Waxuu yiri:" Oo waayo?
Waxuu yiri:" Asad fii Baraathinih Sacad bin Maalik (Sacad bin Abii Waqaas).
Kadib waxuu Cumar qaatay ra'yigii iyo fikirkii C/Raxmaan bin Cowf, ciidamadiina waxuu u dhiibay Sacad bin Abii Waqaas oo uu u dardaarmay. Waxaa kamid ahaa dardaarankiisii : Sacad ibnu Uheyboow!! (Uheyb bin Cabdimanaaf waa awoowga Sacad bin Abii Waqaas iyo adeerka Aamina bint Wahab bin Cabdimanaaf- Nebiga SCW hooyadiis) yaysan ku kedin in lagu yiraahdo waa abtigii Rasuulka SCW iyo saaxiibkiis, Illaahayna xumo kuma tir tiro xumo kale, ee waxuu ku tir tiraa xumuhu wanaagga, Majirto qof isago iyo Alle Sarreeye uu ka dhaxeeyo wax xiriir ah, oo aan ka ahayd mid ku sugan daacadda Alle, dadka kooda shariifka iyo kooda daciifka ahba daatada Alle waa ay u siman yahiin, Allaah waa Rabbigooda, iyaguna waa addoomadiisa. Amarka eeg Sacadoow! kii aad ka aragtay Rasuulkii Alle SCW tan markii lasoo diray jeer uu naga faaruqay, oo laasim markaa amarku waa isagee, tani waa waanadeydii aan kuu dardaarmayey oo haddii aad ka weecato oo ka dacal dhacdo, markaa waxaa burayo camalkaadii oo waxaadna noqoneysaa mid khasaaray''.
Markii uu damcay Sacad inuu dhaqaaqo ayuu misna Cumar yiri :" Sacadoow! waxaad u tegi doontaa arrin kulul (dagaal ) ee ku sabir oo hakugu kulanto cabsida Allaah. Ogoow cabsida Allaah waxay kulmisatay laba arrimood (oo kala ah) ku sugnaashaha daacaddiisa iyo ka fogaanshaha macsidiisa. Daacaddiisu waa in loo carooda yacni la naco adduunyada oo la jeclaado aakhiro. Caasinnimaduna waa in la jeclaado adduunyada oo loo carooda aakhiro, yacni la naco.
Sacad wuu dhaqaaqay waxuuna abbaaray dhankii Ciraaq isagoo ay la socdaan duulkiisii, markiina uu gaaray goobta Nahru Zaruud oo uu ku dhawyahay inuu la kulmo Al Muthanna bin Xaaritha oo midiba midka kale uu u xiisho qabo, buu Muthanna geeriyooday, waxuuna u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray dagaalkii Jassar ee uu ku geeriyooday Abuu Cubeydah bin Mascuud Al Thaqafi. Waxuu Muthanna ciidamadii Ciraaq usii dardaarmay inuu masuul u noqda Bashiir bin Khasaasiyah. Markii ay Sacad gaadhay geerida Muthanna buu u raxmad dalbay oo u duceeyay, waxuuna guursaday haweeneydiisii uu ka tegay oo la oran jiray Salmaa. Sacad markii uu tegay Ciraaq amiir kastoo kamid ah amiiradii ciidamada Muslimiinta ee dhulkaasi ku sugneyd waxay wada hoos yimaadeen xukunkii Sacad oo geyigaas Ciraaq oo idil isaga ayaa amiir ka noqday, siduuba Abaa Cubeydah bin Al Jarraax oo isaguna tobankii jannada loogu bishaareyay kamid ahaaba uu masuul uga ahaa Shaam oo idil. Intaa Dabadeed waxuu Cumar sacad u soo diray ciidamada gurmad ah, waxuuna markii dambe la kulmay ciidamadii Furus maalintii Qaadisiyah isagoo amiir u ah 30 000 ama 36 000 dagaalyahanno ah.
Cumar waxuu yiri:" Illaah baan ku dhaartaye waxaan isku dhufan doonaa boqorrada Cajamta (Furus) iyo boqorrada Carabta''. Kadibna waxuu Cumar soo amray Sacad qaabkii uu sacad u dhisi lahaa ciidanka weerari lahaa Faarisiinta, waxuuna amray in qabiilo waliba oo kamid ah ciidamada Muslimiinta laga xulo rag aqoon dheer u leh tolkooda oo markaas koox waliba la hubiyo tabtooda, kadibna la aado Qaadisiyah.
Sacad sidii buu yeelay waxuuna dhisay ciidamadiisii isagoo ku dhisay amarka amiirkii Mu'miniinta midig, bidax gaadada dambe, ciidamada lugta iyo kuwa fardooleyda iyo kowa horeba. Waxuu Cumar usoo doortay qaadinnimada ciidankaas Cabduraxmaan bin Rabiicah Al Baahili oo loo yaqiinnay Dun-Nuun, isaga ayaana loosoo xil saaray qaybinta qaniimada iyo fayga. Daaciga ciidanka iyo kii wacdinayey mar walibana waxaa loo xilsaaray Salmaan Al Faarisi. Qoridda ciidanka iyo qaniimooyinkana waxaa loo xilsaaray Ziyaad bin Abii Sufyaan. Ciidankan waxaa ku jiray 300 iyo dhowr iyo toban saxaabi, 70 iyo dhowr kamid ahi waxay ahaayeen asxaabtii ka qayb gashay dagaalkii Bader, waxaa kaloona la socday 700 oo kamid ah dhashii saxaabada. Kadib Cumar waxuu soo amray inuu Sacad ku dhaqaaqo Qaadisiya, waxuuna amray inuu qaado jidka oo wixii uu helaana uusan u gaban oo aysan cabsi gelin tira badni kastoo ay cadawgu ku suganyahiin. Misna waxuu usoo diray warqad kaloo uu ugu dardaarmayo ciidamada Muslimiinta iyo amiirkooda Sacad, waxuuna u tilmaamay inuu sabro sabar baliiq ah oo uu Alle hiil iyo gargaarba weydiisto iyo in uu badiyo qowlka laa xowla walaa quwati illaa Bil-laah. iyo in uu mar waliba warqad usoo diro isagoo ka codsaday inay warqaddaasi noqota mid u hadleyso sida isagoo ( Cumar ) uuba u jeedo ama ay muuqdaan ciidamada dhulka Ciraaq, waxuu Cumar ka codsaday Sacad inuu u sifeeyo halka ay Muslimiintu marayaan iyo halka ay dagayaan intuba oo maalin waliba iisoo dir warqad ayuu yiri. Markaa buu Sacad u diray amiirkii Mu'miniinta warqad uu uga warramayo halka ay kusuganyahiin isaga iyo ciidamadiisii iyo in ay is heli doonaan Rustum arrinkuna uu Alle ogaal badan yahay sida uu xaal ku dambeyn.
Cumar ibnu Al Khaddaab markay u tegtay warqaddii Sacad ee ka warrameysay xaaladdii Muslimiinta ayuu u duceeyay ciidanka si guud, gaar ahaanna Sacad buu u duceynayey har iyo habeenba isagoo Alle uga baryayey inuu nasri iyo guul ka siiyo cadawga. Sacad horey buu u socday isagoo ku jira dalabka Qaadisiya, markiina uu marayey meesha la yiraahdo Al Cudeyb baa Muslimiintii waxaa ku soo baxay jamac Faarisiin ah oo uu hoggaaminayo Sheyrizaad bin Ardaaweyh, halkaas bayna Muslimiintii ku jibiyeen cadawgii Majuusta oo ay ka qaniimeysteen qaniimo badan, kadibna qaniimadii buu Sacad intuu qeybiyey ayuu khumuskiina u diray amiirkii Mu'miniinta ee Cumar ibnu Al Khaddaab. Muslimiintii aad bay ugu farxeen guushaas ay gaareen, waxayna u noqotay rayn rayn iyo farxad iyo niyad dhis. Kadib waxuu diray siriyad yacni wardoon uu madax uga dhigay Qaalib bin Cabdullaahi Al-Leythi. Dagaalkii Qaadisiyah
Kadib Sacad wuu dhaqaaqay waxuuna degay Qaadisiyah oo uu diray siriyaad iyo wardoonna, waxuuna halkaas ku sugnaa bil uusanna cidi la kulmin kamid ah Faarisiinta, markaa buu Sacad warqad u diray amiirkii Mu'miniinta Cumar bin Khaddaab taasoo uu ku ogeysiinayo xaaladda. Reer miyigii iyo ari raacyadii Furus dhulkoodii bay u yaabeen markay arkeen wardoonnadan galab iyo subax dul heebaabayo deegaannadii ay xoolahooda ku raacan jireen, markaa bay u tegeen boqorkii Yazdajrid oo ay ku yiraahdeen:" Haddaydaan naga kaafinin kuwan (Muslimiinta) oo aydan inooga fillaanin waxaan u dhiibeynaa waxa gacmahayaga ku jiroo idil, qalcadahana waan ugacan gelineynaa''. Kadib Faarisiintii shir bay u fadhiisteen, waxayna isku raaceen in la diro Rustum iyo ciidan uu hoggaaminayo, markaa buu boqorkii Yazdajrid u cid diray Rustum si uu ugu yimaado, markiina uu u yimid waxuu amray inuu ciidanka hoggaamiyo oo Muslimiinta uu ka hor tego hase ahaatee Rustum waa uu ka cududaartay arrintaas mana ahayn ra'yigiisa ra'yi dagaal waxuuna yiri :" Arrinkaan aad waddaan maaha ra'yi dagaal, in Carabta ciidama la iskaga daba diraayi waxaa uga adag in hal mar loo diro ciidan culus oo mar qura jebiyo''. Boqor Yazdajrid wuu diiday waxaan ka ahayn ra'yigiisii ahaa in uu ciidankaasi hoggaamiyo Rustum, markaa buu Rustum isku diyaariyey bixid iyo inuu aado dhankii Muslimiinta. Sacadna waxuu diray wardoonno uu u diray magaallada Xiirah, wardoonnadii waxay usoo tebiyeen in boqorkii Furus ee Yazdajrid uu amray ciidan culus si ay hal mar u jebiyaan Muslimiinta iyo inuu weliba ciidankaas madax uga dhigay Rustum bin Farakhzaad Al Armani oo uu misna u diyaariyey ciidama kale oo gurmad ah. Markaa buu Sacad warqad u diray amiirkii mu'miniinta ee Cumar bin Khaddaab uu ku ogeysiinayo arrintaas, markaa buu Cumarna soo diray warqad kale oo uu leeyahay:" Yaaysan ku kurbo iyo cabsi gelin waxa kaaga imanayo xaggooda (cadawga) ee Alle kaalmo weydiiso oo isaga talo saaro, una dir xaggiisa (Rustum) nin (ciidamada Muslimiinta kamid) ah oo indheer garad ah oo ra'yi u saaxiib ah, si uu xagga Alle ugu yeero, Alle baana yeelaya yeeriddiina aad u yeereysaan mid itaal darri ku riddo (iyaga Furus) oo dufeyso, maalin walibana iisoo qor warqad''. Rustum wuu soo dhawaaday waxuuna ciidankiisii dejiyey goob la yiraahdo Saabaadh, markaa buu Sacad warqad u diray amiirkii mu'miniinta Cumar bin Khaddaab uu ku leeyahay:" Rustum waxuu soo degay Saabaadh isagoo la yimid fardo iyo maroodiyaal uu nagu gilgilayo, waxbase xaggayaga oo aan u aragno majirto, aan ka ahayn inaan jeclaaday inaan mar waliba kula socdsiiyo xaaladda''.
Rustum waxuu dhisay ciidamadiisii isagoo ciidankiisa hore oo 40 000 ah madax uga dhigay Jaalinuus, ciidanka midigtana waxuu madax uga dhigay Hurmuzaan, ciidanka bidixdana Mihraan bin Bahraan waxayna ahaayeen 60 000, ciidanka dambena waxuu madax uga dhigay Bandaraan waxayna ahaayeen 20 000. Seyf bin Cumar waxuu leeyahay:" Ciidamadiisoo idilba waxay ahaayeen 80 000.
Werin kalena waxaa kusugan inuu Rustum la yimid maalintaa 120 000 ciidan ah oo ay raacsanaayeen 80 000 gurmad ah (waa sida ay culimada mu'arrakhiintu badidoodu rajaxeen) oo uu sitay 33 maroodiyaal ah, waxaa kamid ahaa maroodiyaashaasi mid cad oo uu lahaa Saabuur, waxuu ahaa maroodigii ugu weynaa maroodiyaasha oo hor kacayey ama hoggaaminayey. Kadib Sacad waxuu diray jamaaco kamid ah saadaaddii Muslimiinta oo ay kamid ahaayeen: An Nucmaan bin Muqarrin , Furaat bin Xayaan, Xandhalah bin Rabiic At Tamiimi, Cudhaarid bin Xaajib, Al Ashcat bin Qeys Al Kindi, Muqiirah bin Shucbah Ath Thaqafi, iyo Camr bin Macdiyakrib Az Zubeydi. Raggani waxay ahaayeen rag karmeedyadii ciidankaa Muslimiinta, waxaa loo diray si ay Rustum ugu yeeraan xagga Allaah Sarreeyo iyo Islaamka. Markay utageen Rustum baa waxuu ku yiri:" Oo maxaa idin keenay? Waxay yiraahdeen:" Waxaanu u nimmid ballantii uu Allaah inooga kiin qaaday ee ah qaadashada dhulkiinna, iyo inaan qafaallano dumarkiina iyo carruurtiinaba oo aan weliba qaadanno maalkiina, arrintaasina innagu si dhab ah baanu u hubnaa''. markaas ka hor buuna Rustum riyo arkay , taasoo ahayd : Malag Samada kasoo degay oo aruurshay hubkii Furus oo u wada dhiibay Muxammed ( SCW ) oo Muxammadna uu ku wareejiyey Cumar bin Khadaab.
Sida uu xusay Seyf bin Cumar, Rustum wuu ka warwareegayay inuu la kulma Sacad bin Abuu Waqaas iyo Ciidanka muslimiinta , waxayna noqotay markii uu Rustum kasoo baxay caasimadiisii Al Madaa'in illaa iyo intii ay isku heleen muslimiinta goobta Qaadisiya muddo afar bilood ah.
intaasna wuu diidanaa dagaal uu la galo muslimiinta, habeen walibana intii muddadaas lagu jiray, marna wuu u goodin muslimiinta, marna wuu sasabi oo waxuu lahaa wax baan idin siin waan idin arrad tiri, midkiin walibaana daraahiim ( lacag ) baan siini sanadka markii la gaarana intaas in la mid inoogu imaada , iyo eraya kaloo lamid ah isagoo raba inay ka laabtaan dhulka Furus. Markii ciidanka isku soo dhawaaday ayuu Sacad diray nin kamid ah ciidamada fardooleyda ee muslimiinta si uu akhbaar uga keeno nimanka majuusta ah , waxuuna ahaa ninkaas uu diray Dhuleyxa bin Khuweylid Al Asdi, kaasoo ahaa ninkii Nebinimada sheegtay hadana toobad keenay oo wanaagsanaaday. Waxuuna Dhuleyxa raad weyn ku lahaa furashooyinkii Dhulalka Furus. Dhuleyxa waxuu soo qabtay nin kamid ah majuusta oo uu u keenay Sacad ninkii markuu arkay geesinimada Dhuleyxa iyo ciidankii uu kasoo dhex qabtay intuu dhamaa, ayuu islaamay markii dambe .
waxuu ninkaas markii su'aal la weydiiyaba ku mashquulsanaa oo uu ka sheekeynayay geesinimadii Dhuleyxa bin Khuweylid iyo tirada ciidanka uu kasoo dhex qabtay intuu la ekaa. Markaasuu Sacad ku yiri:" War inaga daa taase inooga warran Rustum a, markaasuu yiri:" Waxuu sitaa 120 000 in lamid ah oo gurmadna waa u diyaar, Intaas kadib ayuu Rustum soo cid dirsaday isagoo ku leh Sacad: ii soo dir nin caqli leh oo wax yaqaan, si uu ula naqaasho yacni uu la dooda, markaa bay ahayd markuu Sacad u diray Muqiirah bin Shucbah. Markii uu Muqiirah u tegay, ayaa waxuu Rustum guda galay inuu yiraahdo:" Waxaad tahiin deriskayaga waana idin wanaajin jirnay oo wax xumaan ah idima soo gaarsiin jirin ee haddaba ku laabto dhulkiinnii, una diidi mahayno tijaaradiinna inay dhulka yaga timaaddo. Waxuu Muqiirah ugu jawaabay:" Ma nihin inagu kuwa raadinayo adduun, kaliya hammiga nagu iyo dalabkeennu waa aakhiro, Illaah baa waxuu inoo soo diray Rasuul uu ku yiri: Waxaan kooxdan (Muslimiinta ahi) ku salliday cid kastoon diinteydan diin ka dhiganin, iyaga ayaana uga cad goosanaya, guul ayaanna dushooda yeeli doonaa intay kusugan yahiin (Muslimiinta) diintan. Waa diinta xaqa ah oo aysan jirin cid ka leexato illaa Alle wuu dulleeyaa, ciddii qabsataana Alle wuu cizeeya''. Markaa buu Rustum yiri:" Oo maxay tahay diintu?
Waxuu Muqiirah yiri:" Amaa tiirka aysan ka ansaxmeyn la' aantiisu waa qiridda inuusan jirin Alle la caabbudo oo aan ka ahayn Alle kaliya, Muxammedna ( SCW ) uu yahay Rasuulkii Alle SCW, iyo in lagu qanco waxii uu xag Alle kala yimid''. Waxuu yiri Rustum:" Oo maxaa ka wanaag badan? Oo maxaa kaloo xiga hadana? Waxuu yiri:" Iyo in laga saaro is addoonsiga ay addoomadu is addoonsadaan oo addoonnimadu ay u ahaato Alle oo kaliya ( macnaha isaga oo kali addooma loo noqda oo la caabbudo ) ''. Waxuu yiri:" Oo tanna waa wax wanaagsan, maxaa xigga haddana? Waxuu yiri:" Dadku waa ilmo Aadam iyo Xawaa, waana walaalo dhanka aabaha iyo hooyaduba''. Waxuu yiri:" Tanna waa mid wanaagsan''. Kadib waxuu Rustum yiri:" Bal ka warrama haddii aan diintiina soo galno maka laabaneysaan dhulkayaga? Waxuu Muqiirah yiri:" Haa Wallaahi, una iman mayno wax aan ganacsi ama dan kale ka ahayn dhulkiinna''. Waxuu yiri Rustum:" Tanina waa mid wanaagsan''. Markii uu Muqiirah tegay buu Rustum uga sheekeeyay dadkii madaxda tolkiisa wanaagga Islaamka uu leeyahay iyo waxii dood isaga iyo Muqiirah dhex martay, hase ahaatee waxay ku qaabileen diidmo daran inay qaataan Islaamka. Kadib Rustum waxuu dalbaday in nin kale loosoo dira
Markaa buu Sacad waxuu soo diray nin kale si uu ula soo dooda Rustum, waxuuna ahaa ninkaasi halyeygii weynaa ee Ribciy bin Caamir bin Khaalid bin Camr oo kamid ahaa halyeeyadii Muslimiinta. ( Cumar bin Khaddaab baa gurmad ahaan ugu soo diray Muthanna bin Xaarith markuu dhulka Ciraaq masuulka ka ahaa ). Goobtii uu Rustum fadhiisan jirey waxa lagu qurxiyey xariir, diibaaj, iyo murjaan iyo waxyaaba kaloo lamid ah, isagiina waxay u dhigeen sariir dahab ah oo ay ku qurxiyeen wiqyado iyo noocya badan oo kamid ah alaabaha quruxda, Rustumna waxuu ku fadhiistay sariirtii dahabka si uu u qaabilo waftiga kaga imanayo dhanka Muslimiinta. Ribciyi waxuu ku lebbisan yahay dhar suuf ah oo aan qurxaneyn, waa dharkii reer Xijaas lagu yaqiinnay, waxuu kaloo wataa seyf iyo waran iyo faraskiisa oo kaliya ( faras gaaban ). kamuunan suulin inuu faraskiisa saarnaa jeer uu yimid daraf kamid ah gogashii weyneed ee jidkiisa loogu goglay, ula jeedaduna waxay ahayd in Muslimiinta la indho sarcaadiyo markay dhaldhalaalkaas arkaan oo inta wax yar la siiyo ay sidaa dhulkoodii ugu laabtaan, maxaase dhacay? Ribciyi wuu ka degay faraskii oo waxyaabahii la goglay mid kamid ah ayuuba faraskiisii ku xirtay, kadibna hubkiisii ( warankii iyo seeftii ) buu lasoo galay isagoo ku jeex jeexayo katiifadihii xariirta ee ay wareen reer Furus. Faarisiintii baa ka dalbatay inuu dhigo hubka, waxuuse ugu jawaabay:" Anigu idiinma iman oo idinma soo raadsanin ee waxaan imid markaad ii yeerateen, haddaba igu daayo sideydaan ( anigoo hubkeyga sita ) ama aan iska laabto''. Rustum baa markaa yiri:" Daayo ha ii yimaadee''. Markaa buu soo galay isagoo warankii ku mud mudayo xariirtii la goglay, illaa uu kasoo gaaray golahii uu Rustum fadhiyey. Rustum baa hadalkii billaabay oo waxuu yiri:" Maxaa idin keenay ? Waxuu Ribciyi ku jawaabay:" Waxaan u nimid inaan ka saarno ciddii doonta is addoonsiga ay addoomadu is addoonsanayaan oo aan addoonnimada u saarno Alle xaggiisa, iyo inaan ciriiriga dunida ka saarno oo aan u saarno ballarkeeda, iyo inaan ka saarno diimanka farada badan oo aan u saarno cadaaladda Islaamka, Ruuxii taa naga yeelo waan ka yeeleynaa oo waanna ka laabaneynaa, ruuxiise diida waanu la dagaallameynaa jeer ay ka fusho ballantii Alle naga qaaday? Waxuu yiri Rustum:" Oo waa maxay ballanta Alle? Waxuu yiri:" Waa inuu galayo Janno ruuxii ku dhinta dagaalka lala galay kuwa diiday diinta Islaamka ee ka hor yimid, iyo guul kuwii haray''. Waxuu yiri Rustum:" Runtii hadalkiinnu waan dhageystay ee dib manoogu dhigeysaan arrinkaan jeer aan eegno xaalku oo aad idinkuna eegtaan? Waxuu yiri Ribciy:" Haah! immisa ayaad dooneysaa (inaan dib kuugu dhigo si aad uga soo fiirsataan) maalin ama labo maalin? Waxuu yiri:" Mayee!! illaa aan u cid dirsanno dadkayagii ra'yiga u saaxiibka ahaa iyo madaxdii tolkayaga''. Waxuu yiri Ribciyi:" Nooma jideynin Rasuulkii Alle SCW inaan u sugno cadawgayaga kadib markaan la kulunno wax ka badan saddex casho, ee fiiri arrinkaaga iyo arrinka qowmkaaga, oo kala dooro mid kamid ah saddexdii (Jizyo, Islaannimada ama dagaal) markay kuu dhammaado muddada (saddexda casho ah)''. Waxuu yiri Rustum:" Oo ma seydkoodii (Muslimiinta) baad tahay? Waxuu yiri:" Maya, laakiin Muslimiintu waa sida jir qura kooda ugu hooseeya ayaana magan gelin kara kooda ugu sarreeyo''. Rustum hareeradiisa waxaa markaa isugu yimid madaxdii reer Furus ee lasocotay, markaasuu ku yiri:" Oo waligiin ma aragteen qof ka hadal qurxoon oo ka cizi iyo sharaf badan ninkan (Ribciyi) ? Waxay ku yiraahdeen:" Alleynu ka magan galnay inaad u iilato waxa kan aad u jeeddo oo aad diintaada uga tegto, oo ma waadan arkeynin dharka uu sito? Markaasuu Rustum yiri:" Hoog idinku dhacyee ha eegina dharkiisa ee fiiriyo ra'yigiisa, hadalkiisa iyo hab dhaqankiisa, sideeduna Carabtu maba daneeyaan dhar iyo cunto toona''.
Maalintii labaad ayuu Rustum soo cid dirsaday si nin kale loogu soo diro, markaa buu Sacad u diray Xudeyfah bin Muxsin oo sidii Ribciyi oo kale ula soo hadlay. Maalintii saddexaadna waxaa loo diray Muqiirah bin Shucbah oo siduu ula hadlayey ku xeel dheeraaday hadalka waqti dheer bayna wada hadlayeen oo ay wada doodayeen, waxaana kamid ahaa hadalladii dhex maray sidan:
Rustum ayaa Muqiirah ku yiri:" Miithaalka loosoo qaadan kara soo gallida aad dhulkayaga soo gasheen waa sida duqsi arkay malab oo yiri: Yaa i gaarsiiya malabkaas oo markaa heli doono 2 Dirham? Markii uu ku dhex dhacay oo uu ku maanshoobay ayuu damcay inuu ka baxo, markaasuu awoodi waayey oo misna yiri: Yaa iga saaro oo heli doona 4 Dirham? Sidoo kale miithaalkiinnu waa sida dawaco itaal daran oo ku jirta god ku yaal beer, markii uu arkay ninkii beerta lahaa itaal darrideeda buu u naxariistay oo iskaga tegay. Markii ay cayishay bay wax badan ka fasaadisay (xoolo iyo beerta iwm bay ka cuntay) Markaa buu la yimid ciidankiisii oo soo kaxaystay wiilashiisii si uu uga saaro, hase yeeshee way awoodi waysay cayil dartii markaa buu dilay, haddaba sidaa oo kale ayaad uga bixi doontaan dhulkayaga''. Kadibna caro darteed buu Rustum la sii jeestay oo cadceeddii intuu ku dhaartay buu yiri:" Berritoole baanu idin layn doonnaa''.
Waxuu Muqiirah yiri:" Waad ogaan doontaa''.
Markaasuu Rustum yiri:" Waxaan amray in la idin arrat tiro oo dhar la idiin siiyo, amiirkiinuna sidoo kale ayaan amray iyo in lasiiyo 1000 Diinnaar iyo dhar iyo gaadiid, ee innaga noqdo''. Markaasuu Muqiirah yiri:" Oo ma kadib markii aan itaal darreysiinnay boqortooyadiinnii baa oo aan weliba daciifinnay awooddiinnii? Muddo ayaanu joogi doonnaa dhulkiinna oo aan idinka qaadi doonnaa jizyo idinkoo dulleysan, waxaadna inoo noqon doontaan addooomo''. Markaa buu misna Rustum markale caro darteen la sii jeestay.
Taa ka hor intuusan dagaalku dhicin waxuu Sacad diray rag kamid ah ciidankii Muslimiinta, kuwaasoo uu u diray dhanka boqorkii Furus boqor Yazdajrid si ay xagga Alle iyo diinta Islaamka ugu yeeraan. Markay u tegeen boqorkii bay ka idin dalbadeen inay u galaan, markaasuu isagiina u idmay inay soo galaan. Boqorku waxuu ahaa mid aan akhlaaq suubban lahayn, edabtiisu aad bay yareed, tiiyooy udheereed dhallinyarannimo. Waxuu wax ka weydiiyey dharkooda kan ee ay sitaan magaciisa, kabahooda iwm ee ay siteen. Kol Alliyooy uga jawaabaan buu ku jees jeesayey oo uu wax ka sheegayey. Dadkii Madaa'in deganaa waa ay soo baxeen si ay u eegaan dadka ay boqortooyadii Furus ka fadhin weyday. Waxay arkeen rag dhar suuf ah kulebbisan iyo kabo aan indhuhu soo jiidaneyn, waxay arkeen diifta ka muuqata misna waxay eegeen waxay gaadiid ahaan u siteen oo fardo iyo awr weyti ah, waxayna is weydiinayeen su'aalo dhowr ah oo ay kamid tahay:" Sidey dadka sidan uyaal ay dhulka Furus ula wareegeen oo ay boqortooyadeenna dusheedda u soo degeen? Markii dambe boqor Yazdajrid waxuu su'aalay raggii:" Maxaa halkan idin keenay? Ma waxaad u maleyseen markii aan dhexdayada isku mashquulnay inaad naga faa'ideysan kartaan? Nucmaan bin Muqarrin baa u jawaabay oo hadalka si fiican u dhigay, waxaana kamid ahaa kalmadahiisii sidan: " Alle baa inoo naxariistay oo inoo soo diray Rasuul na tusiyo wanaagga oo na amaro inaan falno, oo na baro sharta (iyo asbaabteeda) nagana reebay, waxuuna nalagu ballamay ajiibidda kheyrku inuu yahay wanaag adduun iyo mid aakhiro''.
Kadib markuu ka sheekeeyey Nucmaan marxaladihii ay diinta Islaamka soo martay iyo halka ay cizi iyo sharaf maanta ka joogto, ayuu u bandhigay boqorkii inuu soo galo diinta Islaamka ama jizyo ama dagaal, waxuu ku yiri:" Waxuu Rasuulkayaga SCW na amray inaan ka billawno umadaha noosoo xiga oo aan ugu yeerno inay nala soo saftaan. Annagu waxaan idinkugu yeereynaa diintayada, waana diinta Islaamka, waxay wanaajisaa kii wanaagsan (oo ay wanaag iyo sharaf u siyaadisaa), waxayna dulleysaa midkastoo dulli ah. Haddii aad diiddaan, arrin tan ugu sharbadan oo ka fudud tan ugu dambeeyso (dagaalka) ee ugu sharta badan waa jizyo, haddii aad diiddaanna waa dagaal. Haddii aad yeeshaan diintayada, waxaan idiin reebeynaa kitaabka Allaah oo aan idiinku qumineynaa inaad isku xukuntaad axkaamtiisa, idinka howlahiinna iyo dhulkiinnuba waanu idinka laabaneynaa. Haddii aad na siisaan jizyo, waanu idinka guddoomeynaa waana idin illaalineynaa, haddiisa aad diiddaan waa dagaal''. Waxuu yiri boqorkii:" Yazdajrid ha idin laayo.. Waxaanan garaneynin dhul ay umadi ku sugantahay oo ka xun kana daran weji xumi oo weliba ka tiro yar idinka. Waxaanu idiin wakiilan jirnay qaryooyinka Dawaxiga (Carabtii tabaca u ahayd) oo iyaga ayaa inooga kiin filnaa, mana aydan damaacin jirin inaad kusoo duushaan dhulka Furus''. Waxuu kula hadlay erayo kul kulul, markaa bay raggii wada aamuseen. Muqiirah bin Shucbah baa istaagay oo hadlay, waxuuna yiri:" Boqoryahoow! kuwa kani waa madaxdii Carabta iyo kuwii hor kacayey, waa ashraaf wayna ka xishoodaan dadka ashraafta ah, kuwa sharafta leh ayunbaana sharfo kuwa kalee sharafta leh, xaquuqda kuwa sharafta lehna waxaa yaqaan oo kaliya kuwa iyagu sharafta leh. Ammaa xaaladda xun ee aad nagu sheegtay, maba jirin cid naga xaalad xumeed, ammaa gaajadayaduna waxaanba cuni jirnay (waxyaaba aan cunno ahayn bahallada, caleemaha dhirta iwm) waxaanna u arki jirnay inay tahay cunto, ammaa deegaankayaguna waa uun iska dhulka guudkiisa, dharkayaguna waxuu ahaa waxa aan ka sameysanno dhogorta geela iyo ariga. Diintayadu waxay ahayd inuu barkayo barka kale laayo oo darkeen darka kale ku xadgudbo, waxaaba dhici jirtay inuu midkayo gabadhiisu noolasha ku aaso isagoo nacayo inay raashiinkiisa wax ka cunto. Xaalkayagu waxuu ahaa kahor sida aan maantadan ku sugannahay sida aan kuu sheegay, markaa buu Alle inoo soo diray nin macruuf ah oo aan garaneyno nasabkiisa, wajigiisa iyo dhalashadiisa, dhulkiisu waa kan ugu kheyr badan dhulkayaga, xasabkiisu waa kan ugu kheyr badan axsaabtayada, aqalkiisuna waa kan ugu kheyr badan aqallayada, tolkiisu waa kan ugu kheyr badan tolkayaga, isaguna naf ahaan waa kaayaga inoogu kheyr badan. Waxuu inoogu yeeray arrinka (diinta) markaasay cidina ajiibin. Qofkii ugu horreeyay ee raaco waxuu ahaa khaliifadii isaga ka dambeeyey (Abuu Bakar). Waxaanu niri been baad sheegtay, suu yiri run baad sheegtay, saan wax ka naaqusinnay markaasuu isaguna u siyaadiyey. Markaa buu Alle markii dambe quluubtayada ku tuuray rumeynta iyo raaciddiisa, markaa buu dhex qaaday annaga iyo Rabbiga uunka dhexdeenna, wax waliboo uu nagu yiraahdo, waa qowlka Allaah, amarkastoo uu na amrana waa amarka Allaah. Waxuu inagu yiri (Nebigu SCW):" Rabbigiin waxuu idin leeyahay: Anigu waxaan ahay keli, mana jiraan wax la ila wadaajiyo, waxaan jiray goor aysan waxbo jirin, shey kastaana wuu hallaagsami doonaa marka laga reebo wejigeyga. Aniga ayaa abuuray shey walibo, oo xaggeyga ayay u ahaan doonaa wax walibo, raxmaddeydu way idin haleeshay, waxaana idiin soo diray ninka kan (Muxammed SCW) si uu idiin tusiyo jidkii aan idinkaga badbaadin lahaa geeri dabadeed cadaabteyda oo aan idinkugu xalaaleeyo daarteyda Daarus- Salaam. Haddaba waxaanu qireynaa inuu (Muxammed SCW) la yimid xaq uuna kala yimid xaq agtiis, waxuuna yiri:" Ruuxii idinku raaco arrinkan (diinta Islaamka) waxuu leeyahay waxii aad idinku leedihiin, waxaana dushiisa ahaaday waxa dushiina ah, kiise diida u bandhigo jizyo , (hadduu yeelana) ka ilaaliyo waxa aad nafahiina ka ilaalisaan, hadday diidaan la dagaallama waa aniga kan dhexdiina xakamka ka ah ee kala xukmin, kiinnii idinka mid ah ee la dilo waxaan gelin doonaa Jannadeyda, kiinnii haraana waxaan ka yeeli doonaa ciribtiisa guul''. Waxuu yiri Muqiirah isagoo boqorka dhankiisa markaa hadalka u tuurayo:" Haddaba dooro jizyo adigoo dulleysan, ama haddii aad doonto seef ama Islaam oo bad baadi naftaada?
Waxuu yiri Yazdajrid:" War ma waxaan oo kale baad iila imanaysaa? Waxuu yiri Muqiirah:" Ma ahan wax aan ula tegay qof aan ila hadlin, haddii uu qof kale oo aan adiga ahayn ila hadli lahaana waan ula tegi lahaa''. Markaa buu Yazdajrid yiri:" Haddaysan dembi ahaan lahayn in ergada la dilo, waan idin layn lahaa, wax agteyda idiin yaalla majirto''. Waxuu markaa Yazdajrid la hadlay dadkiisii oo uu ka codsaday inay u keenaan juuni weyn si uu carro ugu buuxiyo oo uu qoorta u saaro shariifka kuwan (muslimiinta ah).
Markii loo keenay carradii buu yiri:" Waa kuma shariifkiinna? Markaa bay qowmkii wada aamuseen. Caasim bin Camr baa markaa yiri isagoo doonayo inuu qowmka furto oo uu isagu carrada qaado:" Waa aniga shariifkooda, aniga ayaa ah ugaaska kuwan ee ii saari carrada''. Waxuu yiri Yazdajrid:" Oo masidaa baa? Waxay yiraahdeen:" Haah!.
Markaa buu Yazdajrid dusha u saariyey dabeetana uu amray inuu la dhaqaaqo. Caasim raggiisii kale waalaga hor diray oo intuu carradii qaaday buu la socday isagoo dhex qaadaya deyrarkii Madaa'in jeer uu u tegay rakuubkiisii markaa buuna dul saartay oo uu dhaqaaqay.
Asxaabtiisii kale iyana way soo dhaqaaqeen, Caasim ayaana kaga hor maray amiirka ciidanka. Markii uu Caasim marayey meesha la yiraahdo Baabu Qudeys oo ah dacal kamid ah Qaadisiyah buu yiri:" Ugu bishaareeyo amiirka lib iyo guul, waanu ka guuleysan doonnaa Inshaa-Allaah''. Kadib wuu sii socday waxuuna galay qolkiisii oo uu carradii dhigtay, markaasuu soo laabtay oo uu utegay Sacad oo uu arrintii uga warramay. Saxaabadu aad bay ugu farxeen arrintaas waxayna u fasirteen inay tahay qaadashada dhulka Furus oo dhan, maalinba maalinta ka dambeysaana sharaf iyo kor ahaansho iyo cissi ayaa u sii siyaadaysay, halka Majuustu dulli iyo dib udhac iyo dar xumo hor leh iyo wahni iyo dhaciifnimo ay la kulmayeen. Rustum waa uu dhaqaaqay waxuuna aaday boqorkii si uu usoo weydiiyo waxii uu kala kulmay Muslimiinta iyo weliba ra'yigoodii, markaa buu Yazdajridna si cad ugu bayaaniyey xadrigii jawaabahoodii iyo hadalladoodii faseexadda iyo caqligoodii saafiga ahaa. Waxuu misna u sheegay inay aaminsanyahiin guul goor iyo goob welibo. Guud ahaan Yazdajrid waxuu Rustum u dul maray waxii isaga iyo raggii Muslimiinta ee ergada ahaa dhex maray oo hadal iyo dood ahaa, waxuuna xusay falkiisii doqonnimada ahaa ee uu carrada madaxa u saaray Caasim bin Camr, taasoo uu isagu u arkayey inuu wax haggaajiyey hase ahaatee ku noqotay: maxaa iigeeyey? Rustum markii uu dhageystay hadalkii Yazdajrid iyo carradii uu Caasim madaxa u saariyey buu yiri:" Ninku (Caasim) ma uusan ahayn axmaq mana ahayd shariifkooda, waxuu doonayey oo kaliya inuu qowmkiisa furto oo uu isagu carradu qaado, hase ahaatee Illaah baan ku dhaartaye waxay la tegeen furayaashii dhulkayaga''. Rustum waxuu ahaa Munjim yacni mid xiddigaha wax ka sheego sidaynu soo xusnayba. Markaa buu diray nin kamid ah Majuusta si uu uga daba tego haddii uu gaarana uu kasoo celiyo carrada haddii uu gaari waayo oo carradu ay utegto amiirka ciidanka Muslimiinta ee Sacad bin Abii Waqaas taa waxay lamid tahay buu yiri inay dhulkayaga nooga adkaadeen. Ninkii wuu daba galay isagoo doonayo inuu carradu soo celiyo hase ahaatee waa goorma? Waa goor ay carradii u tegtay Sacad bin Abii Waqaas Muslimiintiina ay ku farxeen, Faarisiintiina aad bay uga xumaadeen arrintaas oo waxay caroodeen caro kulul, ra'yigii boqorkuna waxay ku tilmaameen mid iska waalan. Aanu u weecanno dagaalkii iyo siduu ku billawday.
Dhacdadan Qaadisiyah waxay ahayd dhacdo tii ugu weyneyd ee ka dhacdo dhulka Ciraaq, waxayna ahayd mid aad iyo aad u cajiib badan. Markiina ay labadii qolo is wajaheen, waxay ahayd goor uu Sacad xanuunsanaa oo ay ku dhacday xanuun la yiraahdo Carqun-Nassaa, waxuuna awoodi waayey fuulidda gaadiidka (rakuubka ama faraska), markaa baa loo dhisay qasri oo loo goglay labada dhinacna loo geliyey barkimo si uu halkaa kala socda dagaalka. Dagaal gelinta ciidanka waxuu u xilsaaray Khaalid bin Curfudhah, ciidanka midigta waxuu madax uga dhigay Jariir bin C/llaahi Al Bujali, ciidanka bidixdana waxuu u dhiibay Qeys bin Makshuux. Qeys bin Makshuux, Muqiirah bin Shucbah, Al qacqaac bin Camr iyo Haashim bin Cutbah iyo rag kaloo halyeeyo ah waxay ahaayeen raggii ku yimid gurmadka ee uu soo diray Abuu Cubeydah bin Al Jarraax kadib markuu dhacay dagaalkii Yarmuuk. Ciidanka Muslimiintu waxaa lagu sheegaa inay ahaayeen 30 000 ama 32 000 ama 36 000, sidaa si aan ahayna waala sheegaa, calanka ciidanka waxaa dalbaday inuu qaado Cabdullaahi bin Ummu Maktuum, kadib markii laga fursan wayey ayaa loo dhiibay. Sacad